porn စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန် porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အနေဖြင့် porn ကိုအမှန်တကယ်မိတ်ဖက်များထက်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဘယ်ကြောင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ကြည့်ရှု Porn & ED အပိုင်း.
ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော်.
အနည်းဆုံး 40 လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal လင့်ထားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ အဆိုပါ ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများ စာရင်းတွင်ဆန္ဒပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
55 လေ့လာမှုများကျော် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံခြင်း။
ဆောငျးပါး: ဘယ်လိုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း Trump ကိုမှန်ကန်လိင်နိုင် neuroscience ထုတ်ဖော်ပြသ
ငါ [လိင်ဆက်ဆံဖို့] ငါကြိုးစားနေသည့်အခါစိုက်ထူရဖို့ကယ့်ကိုခဲယဉ်းပါတယ်။ ထရန်အတွက်မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာသည်။ တကယ်ရှက်စရာ ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲနီးလာပါလိမ့်မယ်
သင်သည်အလွန်တရာညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူဖြစ်ပါသလား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း (သို့) တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုထိုးဖောက်ခြင်း၊ အကယ်၍ သင်၏ဆရာဝန်ကသင်၏ပြwနာများအတွက်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင်၊ သူသည်သူမအား Viagra ၏စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးပြီးသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများအတွက်အကြံပေးခြင်းကိုသင့်အားရည်ညွှန်းလိမ့်မည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယူဆချက်အရသင်၏ပြissueနာသည်ဇီဝကမ္မဗေဒထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်) ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့သင်က porn ကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ penile ရဲ့ကျန်းမာရေးကကောင်းပါတယ်။
ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား ထိုပြဿနာသည်သင်၏ဦးခေါင်း၌အမှန်ပင်ကြောင်းအကြံပြုမဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့လိင်တံ, ဒါပေမယ့်အဓိကအားကြောင်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ အထူးသ overstimulation အပျော်အပါးနှင့်သေး Hyper-တုံ့ပြန်မှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့ရန်သင့်အားလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုလုပ်ရာကသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပလပ်စတစ်စသောအပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤ စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ ဟုခေါ်ကြသည် desensitization နှင့် sensitive က အသီးသီး။ အတူတူသူတို့ကဘာကြောင့် porn ဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလဲ၊ သင့်ကလေးငယ်ကဘာကြောင့်မလုပ်သလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။
သငျသညျစိုးရိမ်ထိတ်လန်ခင်မှာအဲဒီဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအမှန်တကယ်လိင်မှကြိုးတဲ့သူကယောက်ျားတွေအတွက်အလွယ်တကူနောက်ပြန်လှည်-အရှိဆုံးဖြစ်ပေါ်လာကွောငျးသိရ ရှေ့မှာ highspeed အင်တာနက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ porn မှ masturbating ရပ်တန့်တဲ့သူယောက်ျားတွေယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်ပြန်လည် 2-8 လအတွင်း (မကြာခဏပြီးနောက် လည်ချောင်းနာဆုတ်ခွာ ယာယီနှင့်အဲဒီအချက်ဟာ လိင်စိတ်၏မရှိခြင်း):
(အသက် ၃၀၊ ၄ လ) Reboot ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့ငါထွက်ရင်၊ caress စတာတွေဆိုငါခဲယဉ်းပြီးကြာရှည်ခံသည်။ ငါတကယ်ပဲတော့ဘူး penile function ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။
စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများကိုသင်ဖွစျပှားနနေတယ်ဆိုရင်, ဒီယူ ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု။ သင့်ရဲ့ပြဿနာများကို porn-ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသလား? သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်မယ့်အပြောင်းအလဲတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဖတ်နေထားပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကမှားယှငျးစှာသငျသညျ porn မှထှတျအထိပျနိုငျလြှငျကောက်ချက်ချစေခြင်းငှါ, သငျသညျ ပြaနာသည်သင်၏အရက်သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အပြုအမူသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်သို့မဟုတ်သင်၏စိုးရိမ်သောစိတ်တစ်ခုတည်းတွင်သာတည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အကုန်အကျများပြီးထိရောက်မှုမရှိသော၊ လိင်မှုကိစ္စတိုးပွားစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ပြproblemနာနှင့်လည်းကျန်ရှိနိုင်သည်
ငါ porn ဘို့ခဲယဉ်းရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အရာရောက်သောအခါ, ငါ Cialis ကိုယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်မပိုပြီး ယူ. , ပင်ထို့နောက်သူကသာတစိတ်တပိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသည့်အခါကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ WTH? သို့သျောလညျးပဲ porn ရန်ခက်ခဲရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက် porn နှင့်အတူပါပဲ overstimulate ရန်လွယ်ကူ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကမင်းက porn ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းစေတယ်။ ရှာဖွေမှုတစ်ခုချင်းစီ၊ ဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုစီ၊ အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုနဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတစ်ခုချင်းစီကသင့်ရဲ့ dopamine ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီ။ ဆုလာဘ် circuitry။ Dopamine ကြောင်းအင်အားကြီးဓာတ်ငွေ့အကျိုးကို circuitry နှင့်အလိုဆန္ဒ, မျှော်လင့်, မတရားသောနှင့်အထူးသဖြင့်တစ်ခုခုချို့တဲ့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲလွန်းဆွအကြောင်းတရားများ အချို့သော အားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဦးနှောက် dopamine ၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုလျော့ကျလာ, ထို့ကြောင့်အပျော်အပါးရန်, ခဏတစ်ဘို့။ အကယ်၍ သင့် ဦး နှောက်သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးသင်ကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏနှင့်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုနေပါကသင့် ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်အာရုံခံနိုင်စွမ်းသို့ပြန်သွားရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ သင်သည်သင်၏ဆုချသောတိုက်နယ်၏နံပါတ်အပျော်အပါးစင်တာကိုနှိုးဆွရန်သင်ပိုမိုအစွန်းရောက်ပစ္စည်းကိုနှိပ်ခြင်းငှါတွေ့လိမ့်မည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သင့်ဦးနှောက် dopamine အချက်ပြခုနှစ်တွင်တိုင်းတာလျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူဤအခြေအနေ adapts ။ သငျသညျ အလိုရှိ ပိုပြီးပေမယ့်အတွေ့အကြုံကိုလျော့ကျလာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ဤသည်ကိုခေါ်ကာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ် desensitization ။ (ကြည့်ရှုပါ မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လော။ ) လတ်တလောသုတေသနပြုလုပ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူစှဲထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်အတည်ပြု လောင်းကစားဝိုင်း, အစာ, ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် အင်တာနက်စွဲ (အရာတို့ပါဝင်သည် ဆိုက်ဘာ erotica စွဲ) ။ စိတ်မသက်မသာဖြစ်သည့်အခါ“ သဘာဝဆုလာဘ်များ” ဟုခေါ်သည့်အရာအားလုံးကိုနွေးထွေးသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်သင်တွေ့ရသည်။
သင်၏ဆုအစီအစဉ်သည်“ ဒါဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလဲ” အတွက်ဘာရိုမီတာဖြစ်သည်။ dopamine အချက်ပြ (အလိုဆန္ဒ) နိမ့်လျှင်, စိုက်ထူနှေးကွေးဖြစ်ကြသည်။ စိုက်ထူသာလာသောအခါပေါ်ထွန်း dopamine အချက်ပြမှုများအကျိုးကို circuitry ကနေစီးဆင်း အဆိုပါ hypothalamus ရန်။
အဘယ်ကြောင့်မစ္စတာမင်္ဂလာ porn ပိုနှစ်သက်ပါသလဲ?
desensitization ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဖြစ်လျှင်, လှုံ့ဆော်မှုမိန်းကလေးတစ် ဦး, သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း, ဒါမှမဟုတ် porn ရှိမရှိစိုက်ထူအားနည်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သိသာတဲ့အချက်ကဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ကအလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲ။ အမှန်မှာ၊ သင်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသကဲ့သို့၊ ညစ်ညမ်းမှု၏ယာယီသက်ရောက်မှု တိုး။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ sensitized အာရုံကြောလမ်းကြောင်း အထဲဝင်ပါ။
မှတ်စု: စွဲဝေါဟာရများရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ Desensitization သင်၏ပျော်ရွှင်မှုအားလုံးအပေါ်သင်၏တုန့်ပြန်မှုအားယေဘူယျခေါ်ဆိုခြင်းကို…အခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အသိ Hyper-reactivity ကို / စိတ်လှုပ်ရှား-ရှိသောသင်၏အစွဲနှင့်အတူသီးခြားတွေကိုသင့်ဦးနှောက်အပေါငျးအသငျးမြားမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ရည်ညွှန်းသည်။
အဲဒီနှစျခု neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုပြောနိုင်ခဲ့လျှင်, desensitization “ စိတ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူး” (dopamine နိမ့်အချက်ပြမှု) သည်ညည်းတွားနေလိမ့်မည် ာင်း မင်းကိုနံရိုးတွေပေါ်မှာနင့်ကို“ နင့်လိုချင်တာကိုငါရပြီ” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါက desensitization ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာပဲ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤနှစ်ဖက်စလုံးယန္တရားသည်သင်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်နှင့်တင်ပြသည့်အခါစိတ်အားထက်သန်မှုနည်းသည်။
တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝမတည်ဆောက်နိုင်သော်လည်းဆိုက်ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါငါရရှိသောအလုအယက်ပြင်းထန်မှုကိုမယုံနိုင်အောင်! အလွန်အစွမ်းထက်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု - tingling, ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပင်တုန်ခါခြင်း။ ကျွန်တော်သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အင်္ကျီကိုမမျှော်လင့်ဘဲကြည့်ရှုမိသည်နှင့်အမျှထိုသို့သောအလျင်စလိုမျိုးကိုမခံစားရပါ။
ဒါကြောင့်အတိအကျဘယ်လိုာင်းပေါ်ထွန်းသနည်း? ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်, သတိထားရဝေးလွန်းယူနှစ်ခုကအရမ်းပုံမှန်ဦးနှောက်ယန္တရားကပါဝင်ပတ်သက်: ရေရှည်အလားအလာ အဆိုပါအရာ (LTP), synapses ၏အားပေးနှင့် ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ synapses ၏အားနည်းသောအရာ (, LTD) ။
ဒုတိယအချက်မှာ PFC ကသင်၏ "ဤအရာသည်အရေးကြီးသည်" ကိုတုံ့ပြန်သည်။ (1) ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်အချက်ပြခြင်းနှင့် (၂) အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုကွင်းဆက်အားဆုိုင်ရာတိုက်နယ်သို့ပြန်သွားသည်။ ထို့နောက်တွင်ဆုတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေး၊ မှတ်ဉာဏ် (သို့) သတိပေးချက်တစ်ခုခုသည်လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီးသင်၏ဆုိုင်ရာအားတိုက်နယ်အားဆူညံသံတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးဘာဂါပူးတွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအနံ့ဖြစ်နိုင်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါတစ်ကောင်အနေဖြင့်ခြံစည်းရိုးအတွင်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ငှက်တစ်ကောင်အတွက်ငှက်ဖျားကိုဖြည့်ပေးတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်သူ့၊ ဘယ်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လို၊ အစားအစာ၊
အရေးကြီးသည်မှာ၊ တုံ့ပြန်မှုကွင်းဆက်သည် dopamine ပေါ်တွင်မပေါ်ပါ။ အဲဒါပြေးပါတယ် အချိုမှု။ အာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်“ Go get it!” ကိုလုပ်ဆောင်ရန်စွမ်းအားရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အချက်ပြမှုများ။ အချိုမှုဆွ ညစ်ညမ်းနေဆဲသင်တို့၏အကျိုး circuitry dopamine နဲ့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်အချိန်မှာတောင်သင့်ရဲ့ဆွဲလဲမြည်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်ဆားကစ် (dopamine) → PFC (အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်) တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်→ (အချိုမှု) circuit ကိုဆုချဖို့။
ယခုအချိန်အထိလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ သို့သော် Sensitization သည်ဤပုံမှန် PFC → glutamate တုန့်ပြန်ချက်လမ်းကြောင်းအားဆုိုင်ရာတိုက်နယ်ထဲသို့အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် super-memory အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည်။
sensitization နှင့်အတူ (ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့) ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမှတ်တရများသည်လူသိများသည့်အလေ့အထများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် သွယ်ဝိုက် အမှတ်တရများ။ ဥပမာ: စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့။ စွဲ-related သွယ်ဝိုက်အမှတ်တရများ Pavlovian သည်စတီးရွိုက်ဆေးများနှင့်တူသည် - လျစ်လျူရှုရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ မကြာသေးမီကသမ္မာသတိ ရှိ၍ အရက်သမားတစ် ဦး သည်ဘားတစ်ခုအတွင်းလမ်းလျှောက်သွားသောအခါဘီယာ၏ရယ်မောသံများနှင့်အနံ့များအားလုံးသည်ဤအာရုံခံကိရိယာကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးပြင်းထန်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ autopilot ကိုအရာကျိန်းသေငါ့ထံသို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောနတ်ဆိုးစွဲခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့နောက်သင်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အစစ်အမှန်သည်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးငရဲဘာဖြစ်သွားသည်၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများကိုသင်ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးဘာကြောင့်ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုအံ့သြသွားသည်။
ဤအစွဲ-related အပြောင်းအလဲများအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အဆိုပါမာစတာ switch သည်ပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည် DeltaFosB။ ၏စားသုံးမှုမြင့်မား သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ) သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ထိခိုက်, အကျိုးကိုစင်တာများတွင်စုပြုံမှအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းမရှိ DeltaFosB (ကကူးယူအချက်) ၏နီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု။
ဒါဟာစွဲစတင်, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်ကြောင့်ရေရှည်တည်တံ့စေရန်ကူညီပေးသည်သာ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ရပ်တန့်ပြီးနောက်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်, relapse ပိုပြီးအောင်, တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ဆွဲထားတဲ့။ ထို့အပြင် sensitized စွဲကြောင့်အချိန်အမည်မသိငွေပမာဏအဘို့အရစ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း pathways ။ တိုတောင်းခုနှစ်, porn တွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဘို့သင့်ကိုမီးလင်းစေနိုင်သည်။
စွဲ neuroplasticity အဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ခံရနိုင်သည် synapses အတွက်ဆက်လက်စားသုံးမှု→ DeltaFosB →မျိုးဗီဇ၏ activation →အပြောင်းအလဲများကို→ထိခိုက်စေ desensitization။ (ကြည့်ရှုပါ အဆိုပါစွဲဦးနှောက် ပိုပြီးအသေးစိတ်ဘို့။ ) ဒါဟာပုံ desensitization နောက်ဆုံးမှာဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု (hypofrontality), စှဲနောက်ထပ်အဓိကအင်္ဂါရပ်များဆုံးရှုံးမှုရန်။
သငျသညျအဆုံးစွန်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ခဏလောက်ပုပ်နေလိမ့်မယ် သတိရပါ၊ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်၏အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအများအားဖြင့်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်ရိပ်မိခဲ့သည်။ သငျသညျသုတ်ရည်လွှတ်မှုတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူကလေးလုပ်နေခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။ သင်မှတ်မိနိုင်အောင် super-memory အလိုမရှိ သင်၏ "တန်ဖိုးရှိသော" အလှအပများ၏ bevy (သို့မဟုတ်သင်အထွတ်အထိပ်ခဲ့သမျှ) ကိုစွန့်လွှတ်။
အခုဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ပြီးသား, ရှောင်ခြင်းဖြင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုအန်တုအဖြစ် အနိမ့် dopamine ပေါက် နောက်ထပ်။ ဒါ့အပြင်လိင်စိတ်-squelching ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း CRF နှင့် norepinephrine ထရိုက်။ သင့်ရဲ့ desensitization overdrive ၌တည်ရှိ၏, ဒါကြောင့်တကယ့်မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းမခံမရပ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအရှိဆုံးယောက်ျားတွေထိုကဲ့သို့သောတွေ့ကြုံခံစား ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ။ သူတို့ခံစားနေရတယ် နည်းသော ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အစဉ်အထက်အပျော်အပါး, ခံစားချက် နောက်ထပ် စိုးရိမျ, နှင့် နေဆဲမိမိတို့အကျိုးကို circuitry goose နိုငျသောတစျခုအရာဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ စှဲရိုက်ပုတ်ဒါခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အစိုင်အခဲအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ပိုဆိုးသည်မှာ, abstinence စဉ်အတွင်း sensitized "goosing" လမ်းကြောင်း ပင်အားကောင်းကြီးထွား။ သင်၏ပျော်ရွှင်မှုစင်တာသည်နှိုးဆွရန်အော်ဟစ်နေသည့်အလား…သို့သော်စွဲလမ်းမှသာဖုန်းခေါ်သံကိုကြားနိုင်သည်။ အာရုံကြောဆဲလ်များပေါ်ရှိအကိုင်းအခက်များ (dendrites) သည်ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည် "စူပါ spiny" ဖြစ်လာသည်။ nubs အနည်းငယ်တိုးများလာခြင်းသည် synaptic connection များနှင့်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းစေသည်။ “ Spinal Tap” ဖျော်ဖြေပွဲမှာနားနေတုန်းနားလေးအပိုလေးကြီးထွားတာနဲ့တူတယ်။ သင့်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကို cues (သို့) အတွေးများ (glutamate) ကရိုက်လိုက်သောအခါတဏှာစကေးသည်တစ်ဆယ့်တစ်ဆယ့်ခြောက်အထိရှိသည်။
ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါစစ်မှန်သော libido အတွက်အသက်ရှူလွယ်သည့် sensitized လမ်းကြောင်းကိုမှားယွင်းမှတ်မိနိုင်သည်။ သငျသညျပုံမှန်အစွန်းရောက်တွေ့ကြုံခံစားလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည် လိင်စိတ်အတွက် drop သင့်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တစ်ချိန်ချိန်။ ဤ“ ပြားချပ်ချပ်” အဆင့်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သင့်ကိုမီးစွဲလောင်စေနိုင်ပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်စိုက်ထူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားညစ်ညမ်းရုပ်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်စေနိုင်သည် ကုမ သင့်ရဲ့နှေးကွေးလိင်စိတ်သည်။ အစစ်အမှန်ရောဂါပျောက်ကင်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အသစ်ရဲ့ဦးတည်ချက်အတူတက်ဖမ်းရန်သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာအဆောက်အဦများအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်း, သင့်မိတ်ဖက်အပါအဝင်ရှိသမျှသည်အခြားသောလှုံ့ဆော်မှု, လျော့နည်း arousal ဖြစ်ကြသည်။
ပုံမှန်နှင့်နေ့စဉ်အပျော်အပါးရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်ပိုပြီးကျေနပ်စရာဖြစ်လာအဖြစ်သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပါဝါနေသော်လည်း sensitized လမ်းကြောင်းနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ချုပ်ကိုင်ရှုံးသည်။ pixels ကိုစိုက်ကြည့်ကာဗလာလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်နောက်ဆုံးမှာဦးနှောက်ဟာ sensitized လမ်းကြောင်းက (ထိုကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်အဖြစ်) အခြားအလားအလာဆုလာဘ်နှင့် ပတ်သက်. လမ်းကြောင်းခိုင်မာစေတစ်ချိန်တည်းမှာအားနည်းသွားခွင့်ပြုပါတယ်။
အရင်တုန်းကငါဟာပြင်းထန်သောလိင်အလိုဆန္ဒများကိုတကယ့်အစွန်းရောက်၊ ယခုမူကား၊ ငါညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတိုက်လှန်တော့ပါ၊ သို့သော်သူသည်အဝတ်အစားများ ၀ တ်ထားသည်ဆိုလျှင်ပင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော၊ ပူပြင်းသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့လိုသည်။ ငါသိမ်မွေ့မတိုင်မီပြည်နယ်မှ regressing ပါ၏ကဲ့သို့ဖြစ်၏ - ပိုပြီးသိမ်မွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည့်အခါ။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသကြားအချိုရည်များသောက်သောအခါငါမှတ်မိသလောက်။ တစ်နေ့လျှင် Cola အချိုရည် ၅ ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောက်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကိုစွဲလမ်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါသူတို့ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါငါကအစားအစာတိုင်းမှာဆိုးဆိုးရွားရွားကိုကာကိုလာလိုချင်ခဲ့တယ်။ ရေရှိတာကထူးဆန်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ လလောက်ကြာအောင်ဆက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လုံးဝပျောက်သွားပြီ။ မပင်မဆိုမတရားသော။ အရင်တုန်းကတခါတလေမှာကိုကာကိုလာတစ်လုံးရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ ငါတကယ်ရေပိုကြိုက်တာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲနေသည့်အမြင့်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမျှော်လင့်သည်မဟုတ်ပါ။ အခြားအရာအားလုံးထက်။ စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့အတူသေးငယ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏရယ်မောခြင်း၊ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြုံးနေခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရသည်။ ငါဟာအဆိုးမြင်သမားလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ငါဟာစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ။ ယနေ့တွင်အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုသည် ၂၅ မိနစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းတာကိုငါတကယ်မခံစားရဘူး။ ငါအဲဒီမှာအိပ်ပြီးခံစားချက်ကိုပျော်မွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါဘယ်လောက်အထိငါလာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားခဲ့တယ်။
ငါတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်မျောက်ကိုရိုက်နေသည်ဟုမထင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပိုမိုလွန်ကဲစွာဖြစ်လာသည်။ ဒါ့အပြင်ငါအပြင်ထွက်တဲ့အခါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုပိုခံစားရတယ်၊ အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဟာ“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ပဲလို့တစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါ porn ချင်တယ်။
ငါနေဆဲ porn flashbacks နေဆဲ: porn ကြယ်များသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းများအစိတ်အပိုင်းများ။ ပထမအပတ်စုံတွဲရဲ့အစပိုင်းမှာဒီ flashbacks တွေကကျွန်တော့်ကို porn တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ၊ အခုသူတို့ကိုငါရတဲ့အခါအဲဒီအရာတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတကယ်မခံစားရဘူး။ ဒီပုံတွေကိုငါ့ခေါင်းပေါ်ကနေမြင်ရတာကျွန်တော်အပြေးမြန်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမပါဘဲဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာပါ။ သူတို့ရဲ့စွမ်းအားကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်။
ပုံရိပ်တွေနှင့်အမှတ်တရများလည်းညှိုးနွမ်း: ငါသူတို့တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှအရာအချို့မေ့လျော့မပေးနိုငျဟုလူစုထဲကပို့စ်နံပါတ်မြင်ကြပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အတွေ့အကြုံကနေ, ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအချို့ကိုလုံးဝသွားဘယ်တော့မှမညျဖွစျကွောငျးပွောဆိုနိုငျသညျ။ သို့သော်အများစုမှာမည်။ ငါ 300GB stash ခဲ့ရပြီးမှန်မှန်ငါ browser ကိုပိတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်ကပွင့်လင်း 130 tabs များရှိ "ဟုသတင်းစကားကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာအစည်းအဝေးများရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ချင်သင်သေချာပါသလား? "။ ငါမြင်ရပါတယ်အရာကို 95% မအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ 5% မှတ်မိနိုင်နှင့်သင်တို့တွင်အချို့သောအဘို့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤတွင်အရာကယ့်ကိုယခုအရေးမပါဘူး, ပါပဲ။ ငါကအသေးစိတ်အချို့သည်မှတ်မိနှင့်ပယ် shrug နိုင်ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတွင်အရှက်ကွဲခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုငါ့ကိုပြန်သွားကြသည်မှမယ်လို့ယခင်ကအကြောင်းမရှိကြောင်းပျင်းရိ, အာရုံ-ကျရောက်နေတဲ့အတွေးအခေါ်ကျန်ရစ်သကဲ့သို့သူများသည်ပုံရိပ်တွေတော့ဘူးငါ့ကိုအပေါ်တစ်ဦးကိုင်မရှိကြပါဘူး။
အရင်တုန်းကကျွန်မအလှတရားကိုသတိထားမိခဲ့ပေမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေချင်စိတ်မရှိခဲ့ဘူး။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive အားလုံးကို porn ကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ ငါ့အတွက်လိင်ဆိုင်ရာအရာအားလုံးဟာညစ်ညမ်းမှုပဲ။ ငါဒီd* ck ရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုငါဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ အခုတော့လိင်ဟာလုပ်ဖို့သဘာဝကအရှိဆုံးလို့ခံစားရတယ်။ “ ငရဲ၊ ငါ့ကိုလိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငရဲအင်းငါနှင့်ငါနှင့်အတူပါချင်လိုထွက်အဲဒီမှာမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်! " ရုတ်တရက်ဆိုလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူသောအတွေးများသည်အလွန်မိုက်မဲပြီးအချိန်ဖြုန်းတီးနေသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားအများစုခံစားရသောအရာကိုခံစားရတယ်။ အံ့သြစရာပဲ
နောက်ဆုံးတော့ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျွန်မကပြန်ပြောပြတာနဲ့တူတူပဲ။ အနှစ်သက်ဆုံးမြင်ကွင်းများကိုရှာဖွေခြင်းပင်မအောင်မြင်ပါ။ porn အချို့လမ်းအတွက်ပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမှတ်မိသလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်ငါပြန်ဆွဲနေတုန်းပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်နီးပါးမဖြစ်သဖြင့်ပြန်သွားရန်မလွယ်ကူပါ။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သောကြောင့်၊ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဤအရာသည်ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောအမှိုက်များ (အမှတ်တရများ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာများ) သွားသောနေရာတစ်ခုရှိသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငြင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရတယ်။ လိုပဲမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ခင်ဗျားလက်ခုပ်တီးတာနဲ့တူတယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကလက်တွေကြားမှာတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်လေကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။
ဒီတော့ဒီမှာငါ ၇၅ ရက်နေပြီ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုကြည့်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဟာဆွဲအားပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ၀ ယ်နေတုန်း '၆၀ နဲ့ ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ' မှာရှိခဲ့တယ်။ ဆွဲပြိုင်ကားမောင်းသမားတစ် ဦး အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်သူ၏အတန်ငယ်ပျော့ပျောင်းသောရည်းစား၏ပုံများပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ '၇၀' အစောပိုင်းတုန်းကတူညီတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းကသူတို့ဟာပစ္စည်းတွေရိုက်နေကြတယ်၊ ဒီညမှာငါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ ငါနောက်ဆုံးတော့သူမကို depersonalizing နှင့်ငါ့အကြံအစည်မြောင်းအတွက်ခေါင်းမသွားဘဲအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြည့်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ သူမသည်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမရှိပါ။ သို့သော်သူသည်လူ့မိသားစု၏အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်း၏အတွေးဝင်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်မကောင်းမှုကိုအနည်းငယ်ခံစားရသည်။ ငါတစ်ခုခုခိုးယူခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ။ ။ ငါဒီအခြေခံအားဖြင့်ဒီလှုပ်ခတ်မှုကစတင်ခဲ့သည့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသဘောမျိုးဖြစ်သည်ဟုတော်တော်လေးသေချာသည်။ အဲဒါဟာကျွန်မရဲ့ပုံမှန်ဆန္ဒတွေရဲ့တိုတောင်းတဲ့ circuit တစ်ခုပါ။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုထိုလှည့်ကွက်သည်လျော့နည်းသွားပုံရသည်။ ကိုယ့်ကိုပြောနိုင်ဖြစ်ခြင်းငါ့ကိုအံ့သြစရာခံစားရစေသည်။ ငါတောအုပ်ထဲကမဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းငါ၏အအသက်တာ၌အစဉ်အမြဲငါထက်သာ။ ကောင်း၏, သာ။ ပျော်ရွှင်။
ကျွန်မအနီး-porn ခဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ကြိမ်၏လက်တဆုပ်စာ, နောက်ဆုံး 18 လအတွင်း, ငါသည် (ပထမရက်) ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါကဖြစ်နိုင်အရက်သောက်အပေါ်ရုံသေခြင်းနှင့်လူတစ်ဦးအမှန်တကယ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တောင်မှမသောက်ဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကမှထွက်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြန်လည်အရက်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့စစ်အရာ, မယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအမှုကိုအကြှနျုပျ၏တုံ့ပြန်မှုဤအချက်မှာပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာနေသည်။ ငါ porn ကနေတစ်ခုခုရှာနဲ့ကျွန်မမဟုတ်တော့အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားနေပါတယ်။ IMHO၊ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အခါတကယ်ကငါတို့လိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုပါ။ BTW ကဘာကြောင့်တိရစ္ဆာန်များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်မယ့်အစားအိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖို့နှောင့်ယှက်တာလဲဟုရှင်းပြသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘ ၀ မှာတောင်မှလူသားတွေထက်အများကြီးရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ မိတ်လိုက်ခြင်းတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုရှိသည်မှာသေချာသည်။
ဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်နားလည်သောသော့ချက်မှာအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောလိင်ကိုမလိုချင်ကြောင်းသိသောအခါ [တစ်နှစ်အကြာ၌ပင်ယောက်ျားတစ်ယောက်] ဒီအဖြစ်အပျက်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိကျွန်တော်ပိုပြီးအံ့ am မိသလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုရမ်များကိုသိပ်မကြာသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝနှင့်ယခု ဆက်၍ လှုပ်ရှားနေပြီဟုခံစားမိပါသည်။ ငါကိုယ်ခံအားမရှိဘူးလို့ငါမပြောခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကိုကောက်ချက်ချဖို့မိုက်မဲရာကျလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့သွေးဆောင်မှုတွေမကြုံဖူးတဲ့အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုစွဲမက်စရာမကောင်းတဲ့အထိရောက်နေပြီ။ ဒါကအထူးဆန်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် porn သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အလားအလာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်။ ဒါဟာမရှိတော့ပါဝါရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ကွမ်တန်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါနဲ့ငါလုံးဝကွဲပြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုလိုပဲ။ ဒါကစိတ် ၀ င်စားစရာမရှိဘူး၊ ငါမနှစ်သက်တာကိုမတွေ့ဘူး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ဖို့အလားအလာလုံးဝမလိုလားဘူး။ ဒါကဒါပဲ၊ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမလုံလောက်ဘူး။ အခုတော့ငါ porn မှာလုံး ၀ မကြည့်တော့ဘူး။ ငါဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ porn ကိုရှာဖွေနေတာပါ၊
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်တွေကိုနေဆဲ၏အစွမ်းထက်ခံစားမှုကျလာသောစေခြင်းငှါ မျှော်လင့်။ သင်သည်အမှန်တကယ်အပျော်အပါးများကို ပို၍ တုံ့ပြန်မှုရှိလာသည်နှင့်အမျှ pixel ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများသည် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိဟုထင်ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သီးသန့်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုသို့ပြန်သွားပါက sensitization လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကသင့်အားအနာဂတ်ပိုလျှံမှုကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေရှိတယ် (ကြည့်ပါ - Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်) ။ ဤတွင်ပုံမှန်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
ငါသည်ငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အခါတကယ့်ကြောင်းကောင်းသောမခံစားရဘူး။ တကယ်တော့ပျင်းခဲ့သည်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်မိနစ်ပြီးနောက်စိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူမသည်ပိုပြီးလိင်လိုချင်ပေမယ့်ငါပြုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးမှာစိုက်ထူခဲ့ပေမယ့်အစဉ်အမြဲငါထိုးဖောက်ရှေ့၌ငါကဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုမေးခွန်းကို-မခဲယဉ်းအလုံအလောက်စိုက်ထူထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။
များသောအားဖြင့်သူ့လိုယောက်ျားတွေဟာအသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိမိတ်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားခဲ့ကြဘူး။ သူတို့ဟာစူပါမြင့်မားတဲ့ octane လောင်စာဆီကိုအစဉ်အမြဲတီထွင်ထားတဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပုံစံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ် နောက်ကျော pruned ဦးနှောက် သူတို့လူကြီးအရွယ်ရောက်သောအခါအချို့သောသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနည်း "မိတ်လိုက်" circuitry ။
သူတို့အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက် (ပုံမှန်လောင်စာ) သို့ပြောင်းရန်အပြီးတစ်ဦးအနေဖြင့်, သူတို့တစ်လျှောက် Ping နှင့်ရံဖန်ရံခါထွက်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား။ တချို့ကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့သစ်ကိုဦးတည်ချက်အတူတက်ဖမ်းအဖြစ်အမှန်တကယ်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်န်းကျင်အချိန်ဖြုန်းနှင့်စိတ်ရှည်ဖို့ကြိုးပမ်းလုပ်ရန်ရှိသည်။ သူတို့ကတခါတရံအလားအလာမိတ်ဖက်ဖို့ပုံမှန်အားတုံ့ပြန်ရန်4လအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက cuddle ရဲ့ buddy ကူညီပေးသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်မတိုင်မီတကယ့်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောယောက်ျားများသည်ကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သော“ တကယ့်မိတ်ဖက်လမ်းကြောင်းများ” ရှိနေသေးသည်။ အများစုသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများကိုသတိမပြုမိဘဲမမြင်ခဲ့ပါ ဒြပ်ဆွ ဘရော့ဒ်ဘန်းကနေတစ်ဆင့်။ သူတို့က porn ကိုချွတ်ချ ထား. အခါ, မိမိတို့အကျိုးကို circuitry ်ပြန်ကောင်း။ အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုအလိုအလျောက်နောက်တဖန်ပူကြည့်ဖို့စတင်ပါ။ အများစုမှာအကြောင်းကိုနှစ်လလိုအပ်ပေမယ့်တဦးတည်း 50 နှစ်အရွယ်မကြာသေးမီက porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှ, သူပြန်ကုန်းနှီးရသာ 8 ရက်ပေါင်း porn-အခမဲ့လိုအပ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုသင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုမှားယွင်းသောပစ်မှတ်နှင့်ချိတ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာတကယ့်တကယ့်တီးဝိုင်းတွေ၊ သူတို့က။ သို့သော်သင်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်နေစဉ် desensitized ပုံမှန်အပျော်အပါးတွေအတွက်၊ သင့်အူလမ်းကြောင်း (တကယ်တော့ ဦး နှောက်အဆင့်) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များအားတုံ့ပြန်မှုသည် ...အုမဲ့။ ညစ်ညမ်းတဲ့အချက်ပြမှုတွေကဒီကိစ္စကိုလုပ်နေတုန်းပဲတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကတော့မင်းဟာနံပါတ်ပြားအရံတပ်ဆင်ပြီးသားနင့်လှည်းဘားကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်၊
ရီးရဲလ်လိင်, ပရောပရည်ထိ, ထိမိခံရခြင်း, အနံ့, pheromones, ဆက်သွယ်ထားသောနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမောက်, ရှာဖွေမျိုးစုံတဘ်များ, အထီးကျန်မှုတွေ, စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမိန်းမဆောင်, သင်၏လက်နှင့်အတူသာအပြန်အလှန်နှိပ်ခြင်း, 2D voyeurism ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ရပ်ကသင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေသလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွင်းကိုလိုလားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ရိုက်ကူးလိုပါကဂေါက်သီးကစားခြင်းကိုအချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်အမှန်တကယ်မိတ်လိုက်ခြင်းတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြားကွဲလွဲမှုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီလား။ rewire ဖို့အချိန်။
Porn ED အားထောက်ကူပါသလား? Tyger Latham, Psy.D. အားဖြင့် ကုထုံး Matters အတွက်
Middleburry College မှဆရာ ၀ န်က ED မြင့်တက်လာသည်ကိုမြင်သောအခါ၊
သူမည်သူမဆိုထဲသို့ရုံဒါကမင်, Davy Rothbart အားဖြင့်
လေ့လာချက်: Value ကို-အခြေပြုအာရုံကို Orient အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပ (၂၀၁၆) ဤသုတေသနကတစ်ချိန်က“ ဆုလာဘ်” နှင့်ဆက်နွှယ်သောအချက်များသည် cue မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများထက် ဦး နှောက်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုဖမ်းယူကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ သုတေသီများက "ဒီတွေ့ရှိချက်တွေဟာစွဲလမ်းမှုမှာအဓိကအခန်းကဏ္aကနေလူသိများတဲ့တန်ဖိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖမ်းဆီးခြင်းကိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းရဲ့အာရုံကြောဓာတုအခြေခံပေါ်မှာလည်းအလင်းပေးပါတယ်" ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
အသစ်: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ (ဝက်နာရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အပေါ်တင်ဆက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်)
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုအဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? (2012)"
01 မှာ 26 / 2012 / 5: 20 ညနေ
အခြားဖိုရမ် fron မှတ်ချက်
ကွန်ပြူတာသုံးလုံးပါတဲ့အိမ်မှာဒီနေ့အလုပ်ပိတ်ပါ။ နေ့ ၆ ရက်မှာငါလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်တုန်ခါမှုနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေသေးတယ်။ ငါဒီပုံမှန် (ပုံမှန်?) မြင့်မားတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းတွေးမိခဲ့တယ်၊ dopamine ကိုလိုက်ဖမ်းတာပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါနောက်ဆုံးတခါကြည့်ခဲ့တဲ့ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းမခံရဘဲတုန်ခါနေတယ်။ ငါကလွဲချော်ဝန်ခံဖို့ရှိသည်, ငါ့စိတ်ကိုနေဆဲပုံရိပ်တွေအပေါ်တောက်ပ။ ဒါကငါမျှော်လင့်ချက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အပိုင်းပါ။ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့ဇနီးရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြန်ပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိူင်တယ်။ ငါချစ်မြတ်နိုးပြီးငါ့ကိုလှည့်စားနေတုန်းသူမကိုအပြည့်အ ၀ စိုက်ထူပြီးပြချင်တယ်။ ငါအသက် ၅၀ ကျော်ပြီ၊ ဖျက်လိုက်ရတဲ့ပုံတွေအများကြီး
01 မှာ 30 / 2012 / 3: 40 နံနက်
အသိကဒီဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်အများဆုံးမကြာသေးမီကဝယ်ယူအရသာနှင့်အတူစတင်သူ့ဟာသူ reverse ဟန်:
ငါခဲအစဉ်အဆက် porn သို့မဟုတ်တော့ဘူးကြောင့်စောင့်ကြည့်စဉ်းစားပါ။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ flashbacks နောက်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ် porn ကိုကြည့်ရပ်စဲသည့်အခါထံမှတကယ်လိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ porn ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများမှလိုပဲငါကြည့်။ , ထိခိုက်စိတ်အလွှာကွာ pealed ခံခဲ့ကြသည်တူသောဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။
04 မှာ 08 / 2012 / 1: 37 နံနက်
အမည်မဖော်လိုသူက“ မိုးကောင်းကင်ကျမကျဘူး” ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
subject: တစ်အမျိုးသမီးများနေ့သူမရဲ့အသက်တာ၏အဆိုးဆုံးလိင် Give လုပ်နည်းဒါကဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအချို့ပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအတွက်အစဉ်အမြဲန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစစ်အမှန်လူသတ်သမားကဘာလဲ? နည်းပညာ + Porn ။
ငါဂယ်ရီ Wilson ၏ဆောင်းပါးများစွာကိုဖတ်ပြီးဒီစိတ်ကူးနှင့် 100% သဘောတူသည် ပြtheနာသည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကို (၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းအလွန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်) ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့အသစ်ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်အပြည့်အဝနားလည်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် + အခမဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ + အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်ရေး = ပြဿနာများ
- တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကယောက်ျားအားစစ်မှန်သောလိင် (ဥပမာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများ) အဖြစ်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း။
- ရရှိနိုင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိမိကိုယ်ပိုင်၊ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့်ဘဝ (“ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကဲ့သို့” သို့သော်လိင်သဘောအရ) အတွက်မရေမရာမကျေနပ်မှုများ။
ဤပြproblemနာသည်မမှန်ဟုဆိုသည့်“ လေ့လာမှုများ” အနေဖြင့်၎င်းတို့၏စိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမျိုးသမီးများနှင့်လိမ်နေသောယောက်ျားများအားလုံးကိုစာရင်းမသွင်းပါ။ ယောက်ျားများသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိန်းမများစွာကသူတို့မိတ်ဖက်မည်မျှရှိသည်ကိုလိမ်ကြသည်။ အတ္တကိုစုဆောင်းတာပါ။
သင်“ လေ့လာမှုများ” ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ Viagra ကိုအသုံးပြုရန်ဝန်ခံရန်လုံလောက်သောရိုးသားသောကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအများစုသည်အလွန်လေးနက်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာပေါ်မှာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင့်မိန်းမ၊
porn ကိုမှန်မှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသင်ဟာအမျိုးသမီးတွေကိုသူမရဲ့ဘ ၀ ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပေးလိမ့်မယ်။
05 မှာ 05 / 2012 / 1: 45 ညနေ
တကယ်ာင်းဖော်ပြသော Reddit ထံမှမှတ်ချက်
ချည်မျှင် - တစ်ဦးကစစ်မှန်သောစွဲ။
ဒီမှာနံနက် ၄:၀၀ နာရီ။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရိုက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ fap မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီဟာကအရမ်းခက်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ရံဖန်ရံခါအော်စကာရာသီအတွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်မရှောင်လွှဲနိုင်သည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆုတ်ခွာနေတဲ့ကာလကိုပြပြီးငရဲလိုထင်နေကြတယ်။ အခုငါနာကျင်မှုနဲ့အတူရိုးရိုးသားသားပေါင်းသင်းနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။
ငါ့ကိုသတ်တာကငါတကယ်ကိုလွမ်းတာပဲ ငါအားလုံးညစ်ညမ်းမှတဆင့်ပုံရိပ်တွေရှာဖွေနေလက်လွတ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုငါလွမ်းတယ်၊ ဒါကဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားပဲ။ ဒါကနေမကောင်းဘူး၊ မှားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါစွဲလမ်းနေတာကိုကောင်းကောင်းညွှန်ပြပေမဲ့၊ fapping နှင့်ပေါင်းသင်းသည့်နွေးထွေးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်သက်သောင့်သက်သာရှိခဲ့သည်။
ငါ nofap ထဲက“ ငါပြန်ပြောင်း” တဲ့ချည်အချို့ကိုစောစောစီးစီးမြင်ပြီးသင်တို့ထဲကတစ်ယောက်က P ကို“ ကြည့်လိုက်တာ” ကိုဖတ်ပြီးဖြိုဖျက်လိုက်သည်။ ငါဘာလို့ P ကိုကြည့်ရတာရူးနေတာလဲ။ ဒီမှာငါအခုနောက်တဖန်ကြည့်ဖို့အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားလိုသောဖြစ်၏။ သင့် ဦး နှောက်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပေးသောအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ငါအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာတစ်ခုမှာကျန်ကမ္ဘာ၏ကျန်နေသေးသည်။ PMO ပြင်ပတွင်မည်သည့်အရာကမျှထိုအရာကိုခံစားခဲ့ရသည်မဟုတ်၊ nofap ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဘဝများစွာကိုအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည်။ ယခုမူကားငါကုန်းပြင်မြင့်သို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်မသိပါ။ ငါစလုပ်တုန်းကအမှုအရာကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပေမယ့်ဒီကန ဦး အကျိုးကျေးဇူးကလူတချို့ကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါထင်တာက PMO ဟာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်မိနေတာပါ။
အိုကေပဲဒီမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှတဆင့် slogging ။ သငျသညျရှိပါကဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
05 မှာ 11 / 2012 / 2: 35 နံနက်
ဒါဟာအံ့သြစရာ, goddammit ပါ! (self.NoFap)
မင်္ဂလာပါ, ငါသည်ဤအုပ်စုတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူမဟုတ်ပေမယ့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါအတော်လေးဝါရင့် NoFapper ဖြစ်ကြောင်းကို🙂
ငါဒီကိုတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါကအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီအပျိုဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးမုန်းတီးခဲ့တယ် .. ငါမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ၃ နှစ်ပြည့်လိမ့်မယ်။ ဝမ်းနည်းပါတယ်ငါသိ၏ သို့သော်လည်းငါသည်ဤအုပ်စုအပေါ်ထိမိ။ လဲနှင့်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းသောနေ့ရက်များ, မကောင်းတဲ့ရက်, တစ်ရက်၏ငရဲရှိခဲ့သည်။
ငါဖြစ်စဉ်ကိုမျှဝေချင်တယ်မဟုတ်ဘဲရလဒ်များကို။ ဒီနေ့ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူငါ၏ဒုတိယနေ့စွဲ၌ရှိ၏။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေး။ ငါတို့ရက်စွဲ၏ ၃ နာရီအတွင်းငါသူမနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည် ငါလုံးဝအသုံးမကျဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ငါ့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသောထိုကဲ့သို့သောနာကျင်မှုကျရှုံးမှုနှင့်အတူလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ဘို့အလွန်အမင်းအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေတစ်ခုခု ... ယခုသူမဘယ်နေရာမှာမှထွက်လာ။ ငါတကယ်ကြိုးစားခဲ့ဘူး, အားလုံးသဘာဝထွက်လာပြီ! ရက်စွဲရဲ့အဆုံးမှာငါတို့ရိုးရိုးလေးရေကန်နားမှာထိုင်နေရင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မမှာအပြစ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားမကောင်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးလုံးဝမခံစားရဘူး။ စင်ကြယ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်း။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဤအရာအလုံးစုံအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် !!!
ရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးအဖို့၊ ကောင်းသောရန်ပွဲကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါ။ ကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော့်ဘဝကိုကြီးမားသောနည်းဖြင့်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်ရန် ၁၁၅ ရက်ကြာခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်အမြဲတမ်းပေးကမ်းမထားပါနဲ့!
ပြီးတော့ဒါကရလဒ်ကောင်းတွေမရဘူး။ မင်းကိုစိတ်ချနိုင်ပေမယ့်မင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ သင် NoFap ဟာသင်ကိုယ်တိုင်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်သင်၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ (စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဓာတုဗေဒပညာရှင်ပါ။ )
07 မှာ 18 / 2012 / 1: 10 နံနက်
အကြှနျုပျ၏ pmo / ed ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ asexual ထင်ဒါမကောင်းတဲ့ခဲ့သည်
LINK - ma_duece133 ရက်ပတ်လုံး
ကျွနု်ပ်၏ pmo / ed သည်အလွန်ဆိုးရွားပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ SO တွေ့ဆုံခြင်းကိုတက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့သူပါ။ ငါချိန်းတွေ့ခဲ့သည့်အခါကပျက်ကွက်ပြီးနောက်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတစ်နေ့ကျွန်တော်နိုးလာပြီး“ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ” ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်ချစ်မြတ်နိုးရန်၊ ငါတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ရန်၊ ငါဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး၊ ငါသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါ SO နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ယခင်ကထက်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။
ငါဒါက porn ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုပဲ၊ အွန်လိုင်းမှာငါ့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေချင်တဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့်ငါဟာစစ်မှန်တဲ့ဘဝမှာမိန်းမတွေကိုဘယ်တော့မှဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့မိန်းမတွေကိုငါမစွဲလမ်းခဲ့ရင်ငါဟာငရဲကလေးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့နေခဲ့ရတယ်၊
ဒီဟာကအဓိပ္ပာယ်ရှိမရှိငါမသိပေမယ့်မင်းအဲဒီမှာရှိနေတယ် ဟိုမှာဒီနေရာကိုသွား၊ ဒါလုပ်နိုင်!
07 မှာ 18 / 2012 / 1: 13 နံနက်
တကယ်တော့ငါပြန်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါအငွေ့ပျံနေသောအရူးအမူးစွဲလမ်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းမများနှင့်သာဆုံတွေ့ချင်သော်လည်းသူတို့နှင့်လိင်မဆက်ဆံလိုပါ။ ငါဟာတိတ်တိတ်လေးနေတတ်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုကိုခံစားချင်တယ်၊ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါသူတို့နှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းကိုမပြုသည်၊
ဒါ့အပြင်ငါ fap အခါငါကဲ့သို့ယောက်ျား၏နည်းနည်းခံစားရတယ်, ဒါကြောင့်ငါလိုက်တယ်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကတခြားယောက်ျားနှင့်အတူမဖြစ်ချင်; သူတို့ကငါကfemတ္တပ္ပစိတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်၊ ပြီးတော့လေထဲမှာအာရုံကြောတွေထူးဆန်းနေတယ်။
ငါသည်လည်းအတိတ်ကာလကသူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကိုလာခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဟာလိင်တူမေထုန်ဆိုတာသေချာပေမယ့်လည်းငါကလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကလုံးဝကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ ဒီဟာတွေကငါ့ယောက်ျားတွေကြည့်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာ၊
ငါ fapping မဟုတ်သောအခါလူတိုင်းနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့အရကိုတွေ့ပြီ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်စခန်းချခြင်းစသည့်လုပ်ရပ်များကိုလုပ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ငါ dudes နှင့်ထွက်တွေ့နိုင်သည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစကားပြောနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောနေသကဲ့သို့ ပို၍ ကောင်းသည်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုကိုသူတို့နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
07 မှာ 22 / 2012 / 3: 51 ညနေ
LINK - ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်
ယောက်ျား ၁ - တစ်နေ့တာလုံးစိုက်ထူမှုတွေအများကြီးရတယ်။ သေတော့မည်မဟုတ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဓာတ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်သည်။ လူတွေကမင်းကိုဘာကြောင့်သူတို့ကိုဖွင့်ခိုင်းတာလဲလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာငါလုံးဝနားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ဖြစ်နိုင်ပြီ။
GUY2- ငါလည်းသူတို့ကိုရပြီ။ မနေ့ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစာပို့တာနဲ့ Nofap မှာကျွန်တော်အခက်ဆုံးဆုကိုအလိုအလျောက်ရခဲ့တယ်။
08 မှာ 16 / 2012 / 2: 51 ညနေ
reddit nofap မှ -
ငါစိတ်ဓာတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေနေတာ။ ဒါကကျွန်မကိုအမြဲတမ်းပြbeenနာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မရဲ့လိင်အကြောင်းစဉ်းစားစေတယ်။ ဒီနေ့ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့တယ် သင်၏ပြproblemနာမှာလိင်ကိစ္စပုံသေနည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကြားရတာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့ငါပြtheနာကလိင်လုပ်ရပ်သူ့ဟာသူအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲအစွန်းရောက်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကဖွင့်ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
08 မှာ 22 / 2012 / 4: 03 ညနေ
PMO များ၏ P ကိုရှာဖွေရာတွင်မည်သူမဆို
PMO များ၏ P ကိုပု MO ကိုထက်ကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲရှာဖွေတာမည်သူမဆို? သာ6ရက်ပေါင်းကြောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအမှန်တကယ်တိုးကိုရှာဖွေဖို့လိုအပျခဲ့သညျ
ငါတောင်မဆိုအမှန်တကယ်နှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲ, ငါ့စိတ်ထဲပုံရိပ်၏တစ်ကျော့ပြန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါသည်, ဆိုလို။
ငါစာအုပ်, BAM ၌နှစ်မြှုပ်နေစဉ်
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်ရ ဦး မည်မှာကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ရသောအချိန်များသည်ကျွန်ုပ်အား P ပုံရိပ်မှနှုတ်ယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အဲဒါအောင်မြင်မှုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရင်တောင်မှ ၆ ရက်အကြာမှာပဲငါဟာငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကို P နှင့်ပြည့်စေခဲ့သည်။ ငရဲ, တခါတရံတွင်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်အိုသို့ရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်!
အရမ်းနာနေတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်နီးပါးက (၂၅ နှစ်သားအရွယ်) fapping စတင်ချိန်မှစ။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ခုကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်ပါ။
သာ6ပတ်လုံးကျော်လွှားဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲ့ကြသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုမတိုင်မီသတိပေးလျှင်, သူကပြောတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်!
အောင်ပွဲရမည့်လမ်း၏နောက်မှတ်တိုင် - P စွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအမှတ်သို့ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အချိန်လေးတိုင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
08 မှာ 27 / 2012 / 7: 12 ညနေ
ကျွန်ုပ်အသက် ၃၀ ရှိပါပြီ
ကျွန်ုပ်အသက် ၃၀ ရှိပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပြီးသင်၏ဇာတ်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆင်တူသည်။ အမြဲတမ်းလူကန်လန်ထကြီးထွားလာ။ အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှခြေမချမိအောင်ဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကောင်းတဲ့ကောင်လေး။ ငါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြု။ နှင့်မိန်းမတို့အားယုတ်ညံ့ခဲ့ကြသောသူတို့အား douchebags သို့လှည့်ချင်ခဲ့ပါဘူး။
ယခုမြန်မြန်ရှေ့သို့သွားပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအစိတ်အပိုင်းမှအပထိုလက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးသို့ပြောင်းလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါဟာကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်၊ ငါဟာရိုးသားတဲ့အဆင်းလှတဲ့မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတယ်။ တခြားယောက်ျားတွေကငါ့ကိုမနာလို ၀ န်တိုတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူမနှင့်အိပ်ရာပေါ်၌ရှိသောအခါကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်သည်။ လူအများရှေ့တွင်ရောက်နေသောအခါအခြားအမျိုးသမီးများကိုတွန့်ဆုတ်စွာနှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ ပိုဆိုးတာကတော့ငါကလပ်တွေကိုချွတ်ပြီးရင်ခွင်အကနဲ့အခြားအရာတွေရလေ့ရှိတယ်။
09 မှာ 06 / 2012 / 4: 58 နံနက်
Day 28 - ကောင်းတဲ့နေ့
စန္ဒရားကိုလေ့ကျင့်ပြီးငါ့ကောင်မလေးကိုသူမ၏တက္ကသိုလ်သို့ပြန်မောင်းခဲ့သည်။ ဒီမှာနှင့်ရှိ Spikes, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုဘာမျှမဖျက်ဆီး။ ငါအံ့သြစရာသစ်သားနှင့်အတူနိုး။ ကျွန်တော့် ED သည်အတိတ်ကာလကဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမသိခဲ့ဘူး။ ငါတကယ်ကိရိယာတခုရှိတယ်၊ ငါမသိဘူး။ အမျိုးသားတွေကဘာကြောင့်အရာရာကိုတည်ဆောက်ရတာကိုနှစ်သက်သလဲဆိုတာအခုငါသိပြီ ငါပိုကောင်းလိမ့်မယ်သေချာပါတယ် ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်၏အိပ်မောကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားက“ မင်းကိုငါချစ်တယ်” လို့ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာမှလွဲရင် ထိုအခါငါပထမ ဦး ဆုံးမှာမှတ်မိနိုင်ဘူး။ ထို့နောက်ငါသဘောပေါက်လာသည်၊ ဤနီရဲခြင်း (ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားမဟုတ်) ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်များကိုဖက်ကာသူမ၏ရင်သားများကိုဖမ်းဆုပ်နေသည်။ ထိုအိပ်မက်တွင်အခြားမိန်းကလေးကိုကျွန်ုပ်ချစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ရည်းစားအားဝန်ခံ။ မရပါ။ ဒါကငါ့ကိုအများကြီး bugging ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကငါ့ရဲ့ချစ်သူရည်းစားမရှိတဲ့အချိန်မှာသူမကလှပပြီးလှပသော်လည်းငါ၌လိင်စိတ်နည်းနေသလား။ ပြီးတော့ငါဟာငါ့ရည်းစားထက်ပိုကောင်းတဲ့၊ ပိုဆိုးတယ်မဟုတ်တဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါဟာအကောင်းဆုံးအရာကိုစစ်ဆေးဖို့နီးကပ်နေပြီလား။
post မှ LINK
09 မှာ 18 / 2012 / 2: 18 နံနက်
ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ရန်ပွဲကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာနံနက်3နာရီဖြစ်။ ငါ porn နှင့် fap surfing ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမြူနေခဲ့ရသည်။ ငါမကြာသေးမီကမိန်းကလေးအသစ်အဆန်းအနည်းငယ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတစ်ခုစီသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ပူသည်ဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကတိသစ္စာပြုထားသည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေသောကြောင့်မည်သည့်ဆန္ဒများကိုမျှကျွန်ုပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ မနေ့ကပဲ SO ကငါ့ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ငါလိုချင်တာကိုအတိအကျမလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသ၊ သင်ဒေါသထွက်လာတယ်။ porn ကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲ။
ငါရေချိုးခန်းထဲမှာထိုင်, ငါ့ Laptop ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွင်းမှတစ်ခုခုကကျွန်ုပ်၏လက်ကိုင်ကိုဆုပ်ကိုင်မည့်အစား r / nofap သို့သွားစေသောအခါကျွန်ုပ်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖွင့်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲအတိအကျမသိရဘူး၊ ငါဘယ်သူလဲ၊ ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာငါမြင်လိုက်တယ်။ порသည်ငါ့အချိန်ဖြုန်းတီးရာငါရရှိမည့်အော်ဂဇင်မကျေနပ်မှုဖြစ်မည်ကိုငါသိ၏။ ဒါတွေအကုန်လုံးငါသိတယ်။ လုပ်ရပ်အတုအမျိုးသမီးများ၏ဒီဂျစ်တယ်ပုံတူ။ ငါ porn သည်ငါ့ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်။ ငါဟာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးရိုးသားတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်ကလေးများအားကျွန်ုပ်ထံမျှော်ကြည့်စေလိုပါသည်။ ဖခင်ကောင်းနဲ့ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်ချင်တယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် porn မပါဘဲကျွန်ုပ်၏ SO ကိုသစ္စာမစောင့်နိုင်ပါကကလေးတွေကိုမရောနှောမီကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုဘ ၀ အတွက်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ကြိုးစားသင့်သည်။ တွန်းအားပေးမှုတွေရောက်လာပြီးငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခိုးချ၊ အဆုံးသတ်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားတယ်။ အတွေးများ?
ငါသည်သင်တို့၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်လိမ်လည်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့သို့မဟုတ်ကျေနပ်စရာလိင်တစ်ဦးချို့တဲ့တက်သည်ဖြစ်စေ PMO အသုံးပြုခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် PMO သုံးပြီးသာအဆုံး၌သင်တို့အဘို့ကပိုပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးလက်သကျသခေံဖွစျ၏။
PMO သည်ပြင်းထန်မှု၊ အမျိုးမျိုးသောနှင့်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်သင့်အတွင်း၌အလျင်အမြန်စံသတ်မှတ်ပေးပြီး၊ အလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်သောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့အနေဖြင့်တာရှည်ခံရန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ရင်ပြproblemနာကရှားပါးပေမယ့်ပျင်းရိတဲ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SO ကသင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေပြီးသူတို့တကယ်လိုအပ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုခံစားရစေတဲ့လိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးပြုစုပျိုးထောင်ပေးတာကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုချပြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်လိင်ကိုပွင့်လင်းစေရန်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် SO နှင့်အတူဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအတူနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်မျှဝေသောလိင်မှုကိစ္စဖြင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်ကငါတို့စတွေ့တုန်းကကျွန်တော့်ဇနီးကတကယ်ပဲကွာရှင်းတာပဲ။ သူမသည်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အရာများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမသည်သူမ၏ပထမဆုံးခင်ပွန်းနှင့်တိုင်ပင်ရန်တစ်ခါမျှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးကြောင်းငါသိ၏။ အကြောင်းပြချက်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသူမကိုပထမဆုံးအကြိမ်ချစ်နေချိန်မှာသူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတဲ့နေရာကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရနေရာမှာထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဘဝဟာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ငါ PMO ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့သည့်အဆုံး၌သာပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။
အခုတော့အဘယ်သူမျှမ FAP ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတူတူငါ့အ shit ရရှိရန်စတင်ပြီးနောက်ကျွန်မသူမကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်သောအခါငါသူမ၏နောက်ကျောပေးဖို့အသုံးပြုကြောင်းတူညီသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးဖို့စတင်ပါပြီအစဉ်အမြဲငါအတွက်ဆုလာဘ်အသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်စတင်နေလေပြီတကား
10 မှာ 07 / 2012 / 3: 36 နံနက်
porn မပါဘဲ fapping ကြိုးစားခဲ့ ... မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာ။ အစပျိုး
porn မပါဘဲ fapping ကြိုးစားခဲ့ ... မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာ။ (ဖြစ်နိုင်သည့်အစပျိုးခြင်း၊ သတိပြုပါ)
ဤသူသည်ငါအမှန်တကယ်ငါ PMO တစ်ခုစွဲပြီသဘောပေါက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေဆန့်ကျင်စိတ်အပြင်းအထန်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် FAP သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာအလုံအလောက်စတင်ခဲ့သည်။ ငါမရှိ, ed ပြဿနာများခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဘဝမှာဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးများ၏ထင်လာတယ်။ သူတို့အတိတ်တွင်ငါ့အားပြောဆို၏ရှိသည်ဟုအဝတ်အချည်းစည်း, sexy အမှုအရာပုံဖော်, အံ့သြဖွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံ။
သို့သော်တစ်ခုတည်းသောအရာများမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာကျွန်ုပ်၏ဒစ်ကိုစီး။ သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစွာအော်ဟစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အားလုံးပစ္စည်း, အားလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ထိုအတွေးများသည်အသည်းအသန်နမ်းရှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွရှိခဲ့သောအထူးရင်းနှီးသောအခိုက်အတန့်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည် ငါသူတို့အခုဘယ်မှာလဲစဉ်းစားလာတယ်။ ဘယ်လိုနေထိုင်မှုမျိုးလဲ။ မျက်ရည်များစတင်ပေါက်လာပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းလာသည်။ ငါအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေနဲ့သူတို့ပုံရိပ်ကိုစော်ကားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော PMO ၏ခံစားချက်များအကြားမစစ်ဆေးနိုင်ပါ။
porn ကငါ့ ဦး နှောက်နဲ့တကယ်ကို fuck ဆိုတဲ့ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးကပျော့ပျောင်းသောလိင်တံနှင့်ထိမိစဉ်မျက်ရည်များကျစေသည်။ ကျွန်တော်မပြီးနိုင်ဘူး ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအသက် ၁၂-၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ၊ ကိုယ့်အတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်အတွေးတွေကိုပုံသွင်းတတ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းစရာမလိုပါဘူး။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအသည်းအသန်နမ်းရှုပ်ပြီးသူတို့နှင့်အချစ်ရေး၊
ဒါကိုညစ်ပတ်တဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာ dp'd ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်။ ငါကြီးပြင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သောချိုမြိန်သောအပြစ်မဲ့မိန်းကလေးများသည်အတု၊ မဟုတ်သည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၊ အခြေခံအလိုဆန္ဒများနှင့်တုန်လှုပ်စေသောလိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများဖြင့်အစားထိုးခြင်းခံရသည်။
ကျွန်မရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အမျိုးသမီးငယ်အပေါ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရင်ခုန်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကလေးဘဝအိပ်မက်တွေပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ။ ဒါလက်ခံလို့မရပါဘူး ဒါကြောင့်ငါ no-fap ပေါ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
10 မှာ 07 / 2012 / 4: 47 ညနေ
အမှန်တကယ်လိင်၏အနိမ့်-key ကိုသဘောသဘာဝအမြဲ porn ၏မြင့်ကထုတ်တဲ့အလုအယက်မှငါ့ကိုပြန်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို porn စွဲဆယ်စုနှစ်အသစ် porn ၏ smorgasbord အပေါ်ချွတ်ရတဲ့ပြီးနောက်တူညီတဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအနိမ့်-key ကိုလိင်တစ်ဦးဘဝကိုမှပြန်လာသလဲ? LINK
10 မှာ 07 / 2012 / 4: 48 ညနေ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်သည့်အခါငါသတိပြုမိသောအရာမှာငါမြင်ကွင်းရှိယောက်ျားနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောလိင်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများနှင့်မကိုက်ညီသောအခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားလျော့။ မကျေနပ်မှုခံစားခဲ့ရသောညစ်ညမ်းမှယောက်ျားလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါလိုပဲငါနှင့်အခြားကောင်လေး (ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်) ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ခဲ့လိုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 'ယောက်ျားတွေ' ကဒီအရူးအမူးကိုဒီလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆီကနေရယူခဲ့တာပါ။ ငါနဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းရင်ငါကငါ့ဇနီးနဲ့ခြေဆွံ့သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တီဗွီကြည့်တာ
ငါမှာအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအခြားယောက်ျားတွေ (အပြာကြယ်ပွင့်တွေ) မှာပျော်စရာလိင်ဆက်ဆံမှုဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတစ်ခုခုခံထိုက်တယ်မဟုတ်လား တရားမမျှတဘူး၊ LINK
10 မှာ 10 / 2012 / 7: 17 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်သောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်စိတ်ကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ PMO နှင့်ဝေးနေသည့်အခါပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားသည်, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းကမ်းကင်းမဲ့နေသည်။
10 မှာ 10 / 2012 / 10: 11 ညနေ
ကျော်စတင်ခြင်းပြီးတော့ Porn ဖြတ်
ဒါက porn ကိုဖြတ်ဖို့ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကြိုးစားမှုမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဖြတ်ပြီးဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာငါကြိုးစားခဲ့တာက porn မှာငါ့ရဲ့ ED ပြproblemsနာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်စပြီးရပ်တန့်ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာငါတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအဆုံးသတ်သွားတယ်။ ငါသူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အပြာဆေးလုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကိစ္စရပ်များကိုဖြတ်တောက်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာက) ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ခန်း၏ပြissuesနာများကိုစိတ်ပူစရာမလိုသောကြောင့်၊ ခ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ session တစ်ခုနောက်ဆုံးသုံးရက်အတွင်းကျော်သုံးအစည်းအဝေးများသို့လှည့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ED သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးမရမှီငါမှထွက်ခွာရန်နှင့်“ ပြန်လည်သတ်မှတ်” ရန်လိုအပ်သည်ကိုအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုယောက်ျားအစစ်အမှန်ထက် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားမိသည်။ ထိုခံစားချက်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အရာအားလုံးပြောင်းလဲလိုသောဆန္ဒထက်ပိုမိုပြောင်းလဲလိုသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါမနက်ဖြန်ငါထူထောင်တဲ့ filter ကို disable လုပ်ပြီးပြွန် site တစ်ခုဆီပြန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
10 မှာ 11 / 2012 / 1: 58 ညနေ
porn-သွေးဆောင် dopamine ။
မနေ့ကငါအရမ်းနီးပါးပြန်လာသော။ ငါမကြာခဏဆိုသောဆိုက်တစ်ခုတွင် 'ကြည့်ရုံသာ' သို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငါတစ်သျှူးအဆင်သင့်နှင့် shit ရတဲ့၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တဆင့်သွားလေ၏။ ကိုယ့်အချိန်မီကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကအစကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် site ကိုကြည့်ရုံငါ့ကိုငါ့တုန်လှုပ်သောထိုကဲ့သို့သောအလုအယက်ပေးခဲ့တယ်, ငါ့နှလုံးလည်းလျင်မြန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့တော့ကြောက်လန့်နေတဲ့ ဦး နှောက်မြူပြန်လာပြီ၊ ငါကလူတွေကိုတကယ်မပြောချင်ဘူး၊ ငါမုန်တိုင်းထန်တော့မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကြည့်ရတာ 'ကြည့်တာ' မတန်ဘူး။ မင်းဒါကိုသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့မလုပ်ဘူးသေချာတယ်
(ဈမျှော်လင့်ပါတယ်) မနက်ဖြန် / ယနေ့ညနေပိုင်းတွင်အားဖြင့်နောက်ကျောပုံမှန်ဖြစ်သင့်သည်။
10 မှာ 11 / 2012 / 3: 59 ညနေ
သင်၏ယခင် fapping / ညစ်ညမ်းအလေ့အထ၏အဆိုးဆုံးအကျိုးဆက်များ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် NoFap ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအမြဲတမ်းပြောဆိုလေ့ရှိသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အရင် fapping အလေ့အထတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုမြင်တာဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါစမယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအခွင့်အလမ်းရခဲ့သောသူငယ်ချင်းတစ် ဦး မှရရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည်၊
ငါရည်းစားရှိခဲ့သည့်အခါအစဉ်မပြတ်ငါ FAP ငါ့လိုအပ်ချက်ကိုလျော့ချဖို့အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအချို့နှင့်အတူပြဿနာများစေ၏။
အဆိုပါအမှုအရာငါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုဆိုးရွားများနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားတယ်မှ fapped ။ ယခုဤစတင်ကတည်းကငါအသစ်အဆန်းမှေးမှိန်နှင့်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်ထက်ပိုမတရားတစ်ခုခုလိုအပ်နားလည်ပါသည်။
ကျနော့်အတွက်ကတော့လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး fapping ကိုပိုနှစ်သက်တာပါပဲ။ ငါ SO နှင့်အတူချိတ်ဆက်မယ်လို့သိသောအခါငါတနေ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အ fapping မှရှောင်ရှားရန်ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ငါကလိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ရှားလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ၊ fapping ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောကြောင့်၊ နံနက်ယံ၌ထ။ မရခြင်း၊ ငါပစ္စည်းပစ္စယအမြောက်အများကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးအလွတ်ကျက်လို့မရဘူး .. စာရင်းကအရမ်းရှည်တယ်၊
ငါ့အဘို့ပြုလုပ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အံ့သြဖွယ်လိင်ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုပေမယ့် (porn နှင့်အတူ) fapping လည်းအဆင်ပြေခဲ့ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာအဓိကဦးစားပေးအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဘယ်လိုမိုက်မဲငါပါပြီနိုင် ?!
10 မှာ 12 / 2012 / 6: 56 ညနေ
မင်္ဂလာပါသူချင်း fapstronauts ။ ငါနှစ် ၂၀ ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရိုက်နှက်နေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း (လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိသောလိင်) မှလွင်ပြင်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုမှကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအော်ဂဇင်မရရှိကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူနှစ် ဦး စလုံးအားပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်လက်ဖြင့်နှိုးဆွခြင်းများကိုပိုမိုရရှိသည်။
မကြာခဏ PMO မှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပြaနာတစ်ခုလား။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်ကောင်းသောအော်ဂဇင်ကို passive ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ရန်သင်ယူခြင်းကဲ့သို့ပင်ခံစားမိသည်။ PMO ကဲ့သို့ fapper သည် passive party ဖြစ်သောသူ၏ browser တွင်လိင်ဆက်ဆံသောပါတီများကိုစောင့်ကြည့်နေသည်။ မင်းရဲ့အကြံပေးချက်ကိုကြားချင်ပါတယ် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် nofap တွင် (ပါ ၀ င်မှုမရှိသေးပါ၊ အားနည်းချက်ရှိသည့်ဓာတ်ပုံအနည်းငယ် မှလွဲ၍ ယခုထိ porn မပါရှိပါ) ဤပြalsoနာသည်မပျောက်သေးပါ။
10 မှာ 14 / 2012 / 2: 56 ညနေ
နိဂုံးချုပ်။ ငါဒါကိုတခြားနေရာမှာပြောဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများသည် PMO ကြောင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိတတ်ပြီး PMO အနေဖြင့် ၄ င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သော 'စွဲလမ်းမှု' ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော်များစွာသောလူအများစုအတွက်မူကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်၏ ပို၍ ကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏အထွေထွေခွင့်ပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာမှပေးသောအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများရရှိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို (နှစ်ဆယ်ရာစုအထိ) ဝေးဝေးချဲ့ထွင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဘ ၀ ၌ပျော်မွေ့ရန်အခွင့်အရေးအတွက်ဘယ်တော့မျှတိုက်ပွဲ ၀ င်စရာမလိုတော့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော့ပျောင်း။ passive ဖြစ်လာသည်။ တင့်ကားထဲတွင်ဆိုင်းထားခြင်းနှင့်ပြွန်မှကျွေးခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားများ (အမှန်တကယ်၊ စိတ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းပါပါ ၀ င်သည်) သည်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးသောလှုံ့ဆော်မှုကိုငြင်းပယ်ခံရသည်။ PMO ကိုစွန့်ခွာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်လှမ်းသာဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်။ ထိုသို့သောစစ်ဆေးမှုများသည်နာကျင်သော်လည်းလိုအပ်သည်။
10 မှာ 17 / 2012 / 4: 25 နံနက်
ငါယောက်ျားလေး ၂၄ နှစ်ပေါ့
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအပြာစာပေစွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည်။ ငါဒီအလေ့အကျင့်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မ PMO ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ငါတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့အရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနှင့်အတူသွားပြီကြောင့်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ငါသော်လည်း masturbating ခြင်းမရှိဘဲသွားဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြောင့် ED အချို့ကိုခံစားနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီ PMO ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ငါနတ်ဆိုးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသည်အဘယ်အရာကိုသုတေသနမှတဆင့်သဘောပေါက်ပါပြီ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးတယ်၊ ငါကလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုထောက်ကူပေးတယ်လို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းယူဆခဲ့တယ်၊ အခုငါ porn သည်ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာမိပါသည်။ ငါ့ hard drive ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစုဆောင်းမှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့အခု porn ကငါ့အတွက်ဆိုးဝါးတဲ့အမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ငါမထီမဲ့မြင်ပြုလိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပြnoနာမရှိဘူး။
ငါ 13 ၏အသက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပြီ။ ထိုသို့အဆိုပါအလုအယက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားရှိသမျှတို့ကိုငါတစ်နေ့မျှော်လင့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစငါအချိန်တွင်မေးမြန်းခဲ့သောငါ၏လိင်ဆီသို့နွေးခံစားချက်တွေကိုနှင့်ငါ့ကိုပေး။ ၏သင်တန်း porn စွဲတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ငါသည်ကိုယ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပြည့်အဝ hard drive တွေစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအထီးကျန်သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့လာသောအခါ၎င်းသည်ညမှာငါ့ကိုကူညီခဲ့။ တခါတရံငါ porn မှာရှာဖွေနေနာရီ binge လိမ့်မယ်။ ငါတကယ်ငါသုတေသနပြုစတင်သည်အထိ porn ငါ့ကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်ကိုသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။
အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါဟာဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါဗီရိုထဲမှာနေတုန်းပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ဘူး။ အကြီးတန်းနှစ်ကကျွန်တော်ထွက်လာပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုအားလုံးကချစ်ကြပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းမှာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ဟားဟား။ ဒါပေမယ့်အားလုံးကောလိပ်ကျောင်းကတဆင့်ငါနဲ့ဘယ်တုန်းကမှအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါအိမ်ပြန်နှင့် PMO အနားယူလိမ့်မယ်။ ငါဟာတခြားလူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မှုကိုပိုနှစ်သက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အခုကောလိပ်ကျောင်းပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာဘဲကောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ မကြာသေးမီကလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပင်မခက်ခဲပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကငါဘာကြောင့်မေးခွန်းထုတ်လာတယ်။
ငါညစ်ညမ်းစွဲအကြောင်းကိုနှင့်ကျော်-sensitive ရုံနှိပ်လိုက် dopamine အရာအားလုံးနှင့်အတူကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့။ porn ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူမည်သည့်အပြုသဘောရလာဒ်များပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်စေသောမရှိသေးပေ။ ဒါဟာငါ့ကိုအခြားလူ့နဲ့အတူလိင်လိုခငျြသို့မဟုတ်ရငျးနှီးမလိုချင်စေခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေဆက်ဆံရေးမှငါ့ကိုအပျောက်ထားရှိမည်သိရသည်။ ဒါကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့ထားပါတယ်တူသောငါခံစားရတယ်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းနှင့်ငါ့ကိုအမျက်ထွက်စေတော်မူပြီငါရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးသဘောထားကဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့အခုငါ PMO ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ မကြိုးစားတော့ဘူး၊ စစ်မှန်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ငါ့ ဦး နှောက်ကို reboot လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ အခုတော့ဒုတိယနေ့ရဲ့အဆုံးမှာ PMO မရှိတော့ဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တာကိုကြည့်တာကခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ငါဒီခရီးစဉ်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာတော့တွေ့ရမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားမှုအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါအပြာရောင်ဘောလုံးနည်းနည်းလေးခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသတိပြုမိတယ်။ အပြင်အခြားငါပင်စဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။ မနေ့ကညအိပ်ရာဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မကူးတတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ငါတောင် horny မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သိသာထင်ရှားတဲ့က dopamine အမြင့်ဆုံးရဖို့ကျွန်မကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းမှာပါ။ UGH! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမျှော်လင့်ချက်အကောင်းဆုံးအဘို့, ဒီစွန့်စားမှုသွားနေပါတယ်! အခြားစစ်ပွဲများတွင်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲမည်။ ငါအနည်းငယ်အာရုံကြော, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လာမည့်အရာနှင့်ပတ်သက်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါဒေါသထွက်တာကအမှောင်ထုကိုဖြတ်သန်းစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
11 မှာ 25 / 2012 / 10: 05 ညနေ
10 မှာ 21 / 2012 / 10: 08 ညနေ
ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို comapre ၏သတိပေး pre-reboot လုပ်ပါလိုခငျြ
သူတို့ PMO မယ်လို့သူတို့အဘယ်သူမျှမ PMO ကတည်းကယခုခံစားရပုံကိုရသောအခါသူတို့ခံစားခဲ့ရပုံကိုအသုံးပြုသူများကသတိပေးရုံချည်။
တချို့ကအဘယ်သူမျှမ fappers သူတို့ရှောင်နေကြတယ်သို့မဟုတ်ပင်ဘယ်လောက်ဆိုးရွားသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးမျှသာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ရှိကြ၏တစ်မြိုင်၏မအောက်မေ့စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်များမျက်မှောက်၌ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
အသစ်ကအပြုသဘောအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာအတိတ်အတွေ့အကြုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ကြည့်ရှုအတိအကျအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကပြန် PMO ကိုသွား shouldnt နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
-PMO ငါ့ကိုကူကယ်ရာမဲ့ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိခံစားရဖွဲ့သောသံသရာခဲ့ VS ယခုငါန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု brigther အနာဂတျအတှကျမြျှောလငျ့
-i အားလုံးမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက် Interstate wasnt ငါသည်လည်းသူတို့၏မျက်မှောက်၌ horny ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်တော့မှ VS ယခုငါသည်ထိုသူတို့ကိုန်းကျင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် horny ခံစားရတယ်ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို fantasize နဲ့ကျွန်မနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ချင်တယ်
10 မှာ 23 / 2012 / 7: 05 ညနေ
10 မှာ 24 / 2012 / 10: 34 ညနေ
အဲဒီလိုပဲငါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါသိတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ ငါကြိုးစားသောအခါငါကသို့ရတဲ့ခဲယဉ်းရှိသည်နှင့်စွန့်ခွာရန်ညစ်ညမ်းမလွှဲမရှောင်, ဒါမှမဟုတ်ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူချိတ်ဆက်လျှင်, ငါရုတ်တရက်သူမတစ်ချိန်ကဖွင့်ခံရဖို့ခဲယဉ်းအချိန်ငါရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုရှာဖွေရန် အဲဒါကိုဝင်တိုက်ဖို့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကြားမှရှိခဲ့သည်။
တူတူပါပဲ၊ ငါဟာတကယ့်ကမ္ဘာမှာမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာ၊ ပရောပရည်လုပ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများကိုနှစ်သက်ပေမယ့်လိင်မှုကိစ္စမှာထက် ၀ က်လောက်သာရှိတာပါ။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်ခြင်း၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်း porn စောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်လျှင်ငါမကောင်းတဲ့ ED ချင်ပါတယ်
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ခြမ်းကိုယူပြီးနှင့်အတူဤမျှလောက်များပြားဖြစ်လာလိမ့်မယ်သကဲ့သို့ငါစိတ်ခံစားမှုပစ္စည်းပစ္စယများအတွက်မိန်းကလေးတစ် ဦး ပိုမိုလိုချင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါတကယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့လိင်စိတ်တစုံတခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုငါပြောခဲ့တယ်။ noPMO မှ စ၍ ငါသည်စစ်မှန်သောမိန်းကလေးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအသိအမှတ်ပြုစပြုလာသည်။ PMOing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကမိန်းကလေးတွေတကယ်တွေးနေလား၊ မတွေးဘူးလား၊ မင်းကမင်းကိုအပေါက်ထဲရောက်နေပြီ၊
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှုတက်ကြွပေမယ့်လိင်အအေးခဲ့ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစိတ်ကူးနိုင်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်) ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတူတကွအခါပြီးတော့ဘာမျှမဖြစ်ပျက် ..
10 မှာ 27 / 2012 / 3: 21 ညနေ
အထီးကျန်ဇနီးသူမ၏နွေးထွေးမှု-phobic ခင်ပွန်း seducing အပေါ်အကြံပေးချက်များလိုအပ်ပါတယ်
အထီးကျန်ဇနီး pls သူမ၏နွေးထွေးမှု-phobic ခင်ပွန်း seducing အပေါ်အကြံပေးချက်များလိုအပ်ပါတယ်
လူကြီးလူကောင်းများ၊ ကျွန်မခင်ပွန်း  ကအခုအချိန်အထိကျွန်တော့်ကိုလိင်မဆက်ဆံချင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်နှစ်ဝက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကအလျင်အမြန်လောင်ကျွမ်းသွားတယ်။
ငါတော်တော်ပိန်သေးတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရဲရင့်ခြင်းကသူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့မတူပေမယ့်သူကငါ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ် .. ငါသူနဲ့ရင်းနှီးချင်တာဘယ်လောက်သိတယ်။ နေ့စဉ်ငါသူ့ကိုမှုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်း, မိတ်ကပ်ဝတ်ကြ၏။ ငါဘယ်လောက်အထိစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပြီ၊ သူ့ကိုငါကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကငါ့နေ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ပဲ။ ယနေ့ငါကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အတူကခုန်လျက်, တစ်အိမ်လုံးကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခဲ့သည်။ သူအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါငါကြယ်ပွင့်ကိုကြည့်နေစဉ်သူ့ကိုနှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုပူနွေးသောအထည်ဖြင့်စုပ်ခြင်း၊ သူ့ကိုထိမိတာကသူဟာနေရာတိုင်းမှာသူ့ကိုယားနေအောင်လုပ်နေတာလို့ပြောလိုက်တယ်။ (ဒါကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာလား။ ) ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ သူ့ကိုနမ်းလိုက်ပြီးသခွားခွက်ထဲမှာ pita chips တွေ၊ raita နဲ့ကြက်သားဟင်းလုပ်ဖို့သွားတယ်။ ပြီးတော့ငါအချိုပွဲကိုယူပြီးသူ့ခန်ဓာကို ၄ ကြိမ်ထပ်ဖြည့်ခဲ့တယ်။ (ငါသူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုအပျော်သဘောကျ) ပြီးတော့ငါဟင်းလျာများပယ်ရှားနှင့်နောက်တဖန်သူနှင့်အတူအိပ်လေ၏။ သူအိပ်ပျော်သွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနင့်မျက်နှာကိုဆေးကြောပြီးအိပ်ရာဝင်တော့မယ်လို့ပြောပြီးနောက်ရင်းနှီးမှုကင်းတဲ့နေ့ကိုကောင်းကောင်းလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူထနိုင်ခဲ့သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါ porn အကြောင်း shit မပေးပါဘူး။ ငါတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို shit ပေးပါ။ အကယ်၍ သူကကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုအနည်းဆုံးနားလည်ကြောင်း / လေးစားကြောင်းပြသခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားနက်ရှိုင်းစွာနမ်းရှုပ်ခြင်းဖြင့်သူပြသခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုပြောခဲ့လျှင်သူ့ကိုညစ်ညမ်းမှုမှလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။
ဒီအရာတွေကိုအရင်ကသူနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျွန်တော့်မေးခွန်းကသူနဲ့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လိုစိတ်ရှိအောင်ငါလုပ်နိုင်မလား၊ ငါသူ့ကိုထပ်မံအပြစ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုထပ်မံဖိအားမပေးချင်ဘူး၊ မင်းသိလား ယခင်က ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်သည့်အရာများဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သနည်း။ ငါကြိုးစားနိုင်သောအရာရှိပါသလား။ ငါသူ့ကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်စေချင်ဘူး၊ ငါဟာတော်သင့်ရုံမျှသာမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရပြီ။ nbd ။
TL; ဒေါက်တာ ] ခေါင်းစဉ် 8 ဖတ်ပါ
11 မှာ 15 / 2012 / 5: 23 နံနက်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Inigo Montoya ပါ။ ကျွန်တော်ကစွဲလမ်းနေတယ်
ဒီ TED ဟောပြောချက်ကိုအစောပိုင်းကဒီမှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါမှာပြaနာရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါကလိင်စွဲလမ်းသူ  ကျွန်ုပ်တွင် ED (သို့) အခြားမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြhaveနာများမှမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ထိုလမ်းကို ဦး တည်နေပါသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့တစ်နေ့ကိုတစ်နာရီလောက်အချိန်ဖြုန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ မော်နီတာအများအပြားမှာ tabs တွေအများကြီးသုံးနေတယ်။ ငါပင်ငါ့နေ့သို့စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ 27-9pm ကနေလိုပဲငါ့ '' ငါ့ကိုအချိန် '' ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအချိန်တစ်နေ့လုံးဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအမှိုက်ပုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ယခုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းသည်။
ငါတောင်မှ porn အကြောင်းကိုအိပ်မက်ခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်လိင်။ porn, အဆုံးစွန် porn, porn ၏ Holly grail ရှာဖွေတာနဲ့တူ porn နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်အိပ်မက်။ ၏သင်တန်းငါကရှာတှေ့နိုငျဘူး။ ငါကတစ်ဦးကိုဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်ရှာပုံတော်အပေါ်င့်နဲ့တူရဲ့။ အဆိုပါ Porn ရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ။
ထိုအပင်အဆိုးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကိုရှက်စရာကောင်းတယ်။ ငါမှာနှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရည်းစားရှိပြီးပူပြင်းတဲ့၊ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ငြီးငွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီးမကြာမီတနင်္ဂနွေညမှာအိမ်သို့အလျင်အမြန်သွားပြီးမျောက်ကိုရိုက်တယ်။ ငါသူမရဲ့အိမ်မှာတစ်ပတ် ၃- ၄ ညနေပြီးတစ်ပတ်မှာတစ်ကြိမ်သာခန္ဓာကိုယ်ကိုရတတ်ပါတယ်။ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ။
12 မှာ 10 / 2012 / 10: 00 ညနေ
ငါ့လက်ျာအသံ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနှင့်ပတ်သက်သောပြitနာမှာသင်၏စိတ်ပြင်းထန်ဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သန်းမှကလစ်တစ်ချက်တည်းသာဖြစ်သည်။ ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုအမျိုးသမီးတွေဟာအစစ်အမှန်ဘဝမှာပုံတူကူးချလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါမျှော်လင့်ချက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (လေးပြဇာတ်) ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်ချိန်ကထပ်မံလှုံ့ဆော်မှုမရှိပါ။ သင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း porn အကြောင်းစဉ်းစားပါသလား
12 မှာ 12 / 2012 / 7: 10 ညနေ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာလိင်ကိစ္စထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုပိုချစ်ဖို့ငါ့ ဦး နှောက်ကိုကြိုးတပ်ထားတယ်
porn စွဲနေတဲ့ Reversible လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါသလား? ငါ NoFap ကြိုးစားကြချင်ပေမယ့်ကောင်းသောအရာမပြုကြလိမ့်မည်စိုးရိမ်ဖြစ်၏။
မိတ်ဆက်ခြင်း - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ အရွယ်မိန်းကလေးနှင့်ယောက်ျားလေးဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်နေ့နာရီဝက်ခန့်ကြည့်ရှုသည်။ တခါတရံငါပင်လုပ်နေတာနဲ့တူမခံစားရဘူးဒါပေမယ့်ငါထင် "Jeez, အဘယ်ကြောင့်မ?" ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ ဒါပေမယ့်ငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါတစ်ယောက်တည်းနေရင်ငါမမြန်သလိုဒါမှမဟုတ်မကြာခဏဆိုသလိုမလာပါဘူး။ ငါဟာနံနက်သစ်သားကနေမလာနိုင်တော့ဘူး၊ ကွန်ဒုံးပဲ၊ ငါအရမ်းပင်ပန်းနေပြီစသည်စသည်တို့ကိုအမြဲဆင်ခြေပေးလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ 20 ကြိမ်ထဲက t ကို3လာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါကလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်လိင်ကိစ္စကိုပိုမိုချစ်မြတ်နိုးရန်ငါ့ ဦး နှောက်ကိုကြိုးတပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် ငါအချို့သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါကအဖြေဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုဖတ်ပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာသိပ္ပံနည်းကျကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ ငါဒီမှာလိုချင်တာကတော့သို့ရာတွင်မဇ္ဈိမ။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်ပြုလုပ်သောအရာသည်ဤသည်ဘုရားကိုလွန်ကျူး။ ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ r-NoFap ဇာတ်လမ်းများကိုကျွန်ုပ်ကြားလိုသည်။ ငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ NoFap ကအခြေအနေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးသလား။ ငါရည်းစားကိုသူထိုက်တန်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးချင်သည်။
TL / DR: အင်တာနက်က porn မှ fapping ကြမည်မဟုတ်ရေရှည်အတွက်အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံသည်ငါ့ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရ? ကြိုဆိုထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းများပို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
12 မှာ 13 / 2012 / 8: 20 ညနေ
အလေးအနက်ထားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာလူတွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀၂ ရက်ကကြည့်တာပါ။ ယင်းသည်ပြန်လည်စတင်ခြင်း၏အစဖြစ်နိုင်ပါသလော။ အခြား 102+ fapstronauts ဘာတွေကြုံဖူးလဲ။
၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည် - porn တွင်အနည်းဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ“ စုံလင်သော” အမျိုးသမီးများထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောအရာရှိသည်။ အစပျိုးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်မရှင်းပြပါ။ သို့သော်ထိုဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများမှအမျိုးသမီးများသည် (စာသားအတိုင်း) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုံလင်ခြင်း၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ယခုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအတုပဲ ဒါဟာဒါ, ဒါအတုပေမယ့်ကျနော်တို့ကအဘို့အကျဆင်းခဲ့သည်။ အဲဒီအမှိုက်တွေကိုရက် ၁၀၀ ကျော်အဝေးမှာရောက်နေတာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်၊ တစ်ချိန်က“ ပျမ်းမျှ” သို့မဟုတ်“ ဆွဲဆောင်မှုမရှိ” တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတောင်သင်စဉ်းစားမိတာကသင်သဘောပေါက်တာကတော်တော်လေးလှတယ်။
ငါ porn တစ်ဦး၏စုံလင်သောသာဓကဖြစ်ပါသည်ထင် supernormal လှုံ့ဆော်မှု။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်၏ MSc အတွက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအလုပ်များကိုလုပ်နေသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သုတေသနပြုစဉ်တွင်ထူးဆန်းသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုတွေ့လိုက်ရ။ ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ကိုထိမိခဲ့သည်။ Porn သည်အပြာရောင်ကြက်ဥကြီးဖြစ်ပြီးblueရာမ polka အစက်များဖြင့်သီချင်းငှက်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥထက်ပင်ပိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်သုခချမ်းသာနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်များ၏သုခချမ်းသာအပေါ်လှုံ့ဆော်မှုအတုကိုယူလိမ့်မည်။ ယခုငါ supernormal ကိုဖယ်ရှားပြီးပြီ, ပုံမှန်ထိပ်ပေါ်မှာနေရာပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ပင် 30 ထိမိခြင်းနှင့်ကိုယ့်2ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်တူညီတဲ့အရာကြုံတွေ့ခံစားဘူး။ ကောင်းပြီ, အမှန်တကယ်ပဲအမျိုးသမီးကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုတယ်😉
စစ်မှန်သော။ သင်၏မျက်စိစင်ကြယ်စေကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, လောကီငရဲအဖြစ် sexy ရရှိသွားတဲ့😉
12 မှာ 23 / 2012 / 11: 00 ညနေ
အခြားဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့လောက်မရှိတဲ့မြင့်သောလိင် drive ကိုရှိသည်သောရှာဖွေတွေ့ရှိ
အခြားဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့တစ်ဦးလောက်မရှိတဲ့မြင့်သောလိင် drive ကိုရှိသည်သောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလား
NostawS ကဖြစ်သည်20 ရက်ပတ်လုံး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသထွက်တာ ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကငါတကယ်သတိထားမိသင့်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုခုရှာဖွေတွေ့ရှိသလိုပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ဘဝနှင့်သေခြင်းကိစ္စဟုခံစားရသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်အလောင်းထားရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားမိသည်။
ဒါပေမယ့်ငါကဒီအလိုဆန္ဒတွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်ကြာမြင့်စွာနှိမ်နင်းခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး၊ ဒါကထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ ဒီခံစားချက်ကပုံမှန်ပါပဲ။ ဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုပြန်လည်ဖြန့်ချိပါ၊ အကယ်၍ မင်းကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းသောဆန္ဒများကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိပါကတစ်ခုခုမှားနေလျှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါ။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သင့်တယ်သည့်အခါနှစ်ပေါင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖြုန်းတီးတာနဲ့တူငါခံစားရတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနိမ့်ကျတယ်လို့အမြဲတမ်းတွေးခဲ့တယ်၊ ယုံကြည်မှုနိမ့်ကျတာကမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောဖို့၊ သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ဆန္ဒမရှိတာပဲ။ အခုငါအရမ်းဆိုးဆိုးရွားရွားတင်ထားချင်တယ်၊ ငြင်းပယ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကမဆိုးဘူး၊ လအနည်းငယ်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး ထံမှငြင်းပယ်ခံရခြင်းသည်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့တာထက်အရှုံးများစွာဆုံးရှုံးမည်ဟုခံစားမိသောကြောင့် ။ ယခုငါလိင်အသည်းအသန်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ငြင်းပယ်ခံရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အရှုံးအမြတ်ထက်အများကြီးပိုရနိုင်သည်။
ငါလုံးဝသဘောတူတယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် (ကျွန်ုပ်သည်အသက်သုံးဆယ်ရှိပါပြီ) ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှမလိုက်ခဲ့ပါ။ ကံကောင်းတာကလူအနည်းငယ်ကျွန်တော့်ဆီချဉ်းကပ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် No Fap ကိုစကတည်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့စိတ်ရူးသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူညနေခင်းနှစ်ခုညနေခင်းအခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် fapping ကိုမဖြတ်ခဲ့လျှင်ဤသည်ဘယ်သောအခါမျှဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်အာမခံနိုင်သည်။ ငါလတ်တလောငါထွက်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မောင်းနှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှကြုံတွေ့ဖူးခြင်းမရှိဟုထင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရှိပါ Fap!
ဟုတ်ပါတယ်၊ အရမ်းထူးဆန်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ သငျသညျအလွန်အမင်း horny နေသည့်အခါမိန်းကလေးများစကားပြောသဘာဝကျကျလာပုံကိုလည်းရယ်စရာလည်း။
သင်ရုံ masturbating ရပ်တန့်သူတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်မခံစားခဲ့ရဘာကိုသိ အတိအကျ တူညီတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအခြားအမျိုးသမီးနှင့်အတူမျိုးပွားရန်အလိုဆန္ဒအနိုင်နိုင်ခံစားခဲ့ရပြီငါအိုင်တီနာဖြစ်၏။
ယခုတွင်ငါသည်ကြောင်းညာဘက်နဲ့တူခံစားကြရသည်။ feelsbadman ။
အစာစားဖို့ထွက်သွားတာပါ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိန်းကလေးတွေကိုဘယ်တော့မှချဉ်းကပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုတာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးစိတ်လိုကိုယ်လျောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မိန်းကလေးများအရေအတွက်ကိုလည်းရရှိခြင်းကသင့်အားကြီးမားသောယုံကြည်မှုတိုးပွားစေသည်။ သင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသူမကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယ်သူပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ဤအချိန်တွင်ငါခံစားနေပုံနှင့်ကျွန်ုပ်ချဉ်းကပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအိမ်မှထွက်ခွာတိုင်းအချိန်တိုင်း။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။
ငါသဘောတူတယ် ငါ့ရင်ခုန်သံတွေလွင့်မျောနေတယ်ငါလွင့်ပစ်တော့မယ်လိုခံစားရတယ် ထို အစွမ်းထက်။ ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကိုမပြုလုပ်သေးသောတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
12 မှာ 24 / 2012 / 2: 52 နံနက်
တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ငါပြဿနာတစ်ခုရှိသည်သောတိုင်းထက် ပို. ယုံကြည်အတွက်။
electric_bobcat အားဖွငျ့ဖွစျသညျ7 ရက်ပတ်လုံး
ငါ့ကောင်တာကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါ ၇ ရက်ရောက်ပြီ ဒီဟာကကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာရှောင်ခဲ့သည့်အရှည်ဆုံးကာလဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အပြုံးမျက်နှာပုံသင်္ကေတမဟုတ်သည့်အခြားအရာတစ်ခုရရှိထားခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်ပါသည်။
သို့သော်လွန်ခဲ့သောအပတ်က ၁၀ နှစ် PMO စွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်ကိုယခင်ကထက် ပို၍ သတိထားမိလာသည်။ ငါသိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဒီနေ့မြို့မှာရှိနေတယ်။ သူမသည်ဆွဲဆောင်မှု ရှိ၍ ရယ်စရာကောင်းသော၊ အောင်မြင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောလူပျိုတစ် ဦး ရှာဖွေသင့်သောအရာများ။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး။ သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ သူနှင့်ချိန်းတွေ့ရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ သူမမှာငါ၌အရည်အချင်းများစွာရှိသောကြောင့်သူ့ကိုငါဆွဲဆောင်သင့်သည်ကိုသိသော်လည်း၎င်းသည်
ဒီဖြစ်စေ, ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ (ငါ့အဟောင်းနဲ့ကျွန်မတက်ဖဲ့ကတည်းက) အတိတ်နှစျတှငျ, ငါမှဆွဲဆောင်ထားရမည်ကိုသိမျိုးစုံမိန်းကလေးငယ်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ကိုရှာဖွေ, ဒါကြောင့်ငါယုတ္တိအရာမှထွက်ဆွဲထား / ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တွက်ဆ။ ဒါနဲ့လုပ်ပါ။ ထိုအတိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်, ငါဘာမှမလိုက်စားအတွက်စိတ်မဝင်စားဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါကငါဖြစ်ခဲ့ဘူးပုံကိုဒါတန်ပြန်။ ငါစွဲမက်စရာ၊ အာရုံကြောစွမ်းအင်၊ ငါနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြည့်နေတယ်။ အခုတော့ငါဘာမှမခံစားရဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ကောင်းပြီ၊ ဘာလို့အဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ ရုံအိမ်ပြန်နှင့် fap "။ ဒါဟာငါ့ကိုချွတ် pissing ပါပဲ။ ငါငါ့ရင်ခုန်စရာပြန်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကဒီဟာကိုမပါဘဲအချည်းနှီးပဲခံစားရတယ်။
ကိုယ့်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြောင့် NoFap ငါ၏လိုက်စားနှင့်အတူပြန်လာကြလိမ့်မည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။ က 3-4 လအတွင်းကြာလြှငျ, ဒဏ်ငွေ။ ကိုယ့်ပြန်ချင်ကြတယ်။ အစဉ်အမြဲငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီအတု bullshit အတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရကြကုန်အံ့ဘယ်လိုငါ့ကိုကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဤမျှလောက်ပိုကောင်းဖြစ်ပြီး, သေးဈကအားလုံးကိုပယ်ရှား fapped ။
12 မှာ 31 / 2012 / 7: 46 ညနေ
ငါ့ ဦး နှောက်က PMO ကိုစစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ | ငါ porn နှင့်အတူဒါပြီးပြီ။
ဝန်ခံချက် - PMO ကိုစစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ | ငါ porn နှင့်အတူဒါပြီးပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့အားဖြင့် __bc1 နေ့က
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်မှအပြာစွဲစွဲသူတ ဦး ပါ။ Reddit က fap / porn စွဲလမ်းမှုဟာတကယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒါရိုက်တာကကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုလုံးလုံးလန်းဆန်းစေခဲ့တယ်
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘားတစ်ခုတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအောင်မြင်စွာအောင်နိုင်ပြီးတစ်နာရီ“ အလွန်ရင်းနှီးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု” ပြီးနောက်ကျွန်တော် ဆက်၍ မလုပ်နိုင်ပါ။ ငါပျင်းတယ်၊ စိတ်မဝင်စားဘူး၊ ဒါနဲ့ငါသူ့ကိုထားခဲ့ပါ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ အိမ်ပြန်ပြီးသူမနဲ့တူတဲ့ hardcore porn အချို့ကိုကြည့်နေတယ်။
ပွိုင့်ဖြစ်ပါသည်: ငါတမင်တကာငါသည်ငါ့အိပ်ရာမှာနာရီဝက်အတွင်းရှိနိုင်ပါသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ FAP / ခက်ခဲညစ်ညမ်းအစားအစစ်အမှန်လိင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ porn ကိုမှန်ကန်သဘောတူညီချက်ထက် သာ. ကောင်း၏ကျိုးကြောင်းညီညွတ်။ ရူးသွပ်? ငါသေချာဒါထင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် ...
မိန်းကလေးအစစ်သည်ကျွန်ုပ်ယခုကြည့်နေသောညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုမှလူအများစုကိုမကြိုက်ပါ။ အမှန်တရားကတော့ဒီလူတွေကိုငါမလုပ်နိုင်တာ၊ တကယ့်လူတစ်ယောက်ကိုမှမလုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တင်မှသာအဆင်ပြေသည်။
ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အမြတ်ထုတ်ယူကရိန်းလူငယ်ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်များ / မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုကိုမနှစ်သက်ကြပါ။ porn / fap ပြီးသွားရင်အပြစ်ရှိတယ်၊ ထိုအသေး, 'ယခုတိုင်အောင်ငါပို။ ပို။ စောင့်ကြည့်။
သငျသညျတူညီသောဆင်ခြင်တုံတရား share သို့မဟုတ်ကပဲငါ့ကိုဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သလား
Reddit မှာရှိနေတဲ့သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က noporn / nofap ကို hard mode ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် (လက်တွေ့မကျသည့်နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်၊ တိုက်ဆိုင်မှု)
02 မှာ 18 / 2013 / 2: 52 ညနေ
အစားအရူးပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့, လိင်ဆက်ဆံပြီးရင် FAP မယ်လို့
porn Shit ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်အသက် ၁၅ နှစ်ကတည်းကနေ့စဉ်လိုလိုသည်းခံခြင်း၊ ပုံများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဗီဒီယိုအချို့။ အခု ၃၂ ယောက်ကအိမ်ထောင်ကျပြီးကျွန်တော့်ဇနီးဆုံးသွားပြီ။ ညစ်ညမ်းဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲ၊ မင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ပထမတော့မင်းကိုငါလိမ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ဇနီးကိုဝါကြွားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကစွဲလမ်းမှုကြောင့်သူမဘယ်တော့မှလုံလုံလောက်လောက်မရှိခဲ့ဘူး။ ငါသူမကိုလျစ်လျူရှုပြီး fap ဖြစ်လျှင်လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ Porn သည် shit ဖြစ်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနည်းခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုပေးသည်။ ယောက်ျားလိုခံစားချင်တယ်၊ လက်နဲ့မဟုတ်ဘဲမိန်းမတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံပါ။ ငါသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ Fap မရှိဘူး၊ ဒီမှာငါ့ရဲ့အတွေးအသစ်ဖြစ်စဉ်ကိုဝယ်ပါ။ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ ခြေလှမ်းတက်ပါ၊ အဲဒီ porn shit ကိုမထိနဲ့။
02 မှာ 26 / 2013 / 7: 11 ညနေ
porn မကောင်းသော: porn အတွက်အမြစ်တွယ်နေသည်မည်သို့ပဲအတိုဥပမာ
porn မကောင်းသော: porn ကိုငါ့ဦးနှောက်ထဲမှာအမြစ်တွယ်နေပါတယ်မည်သို့ပဲအတိုဥပမာ။
ငါကျောင်းကတကယ်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေဒီမိန်းကလေးရှိပါတယ်။ ရှေးကာလကငါပူပြင်းသောအစစ်အမှန်ဘဝမိန်းကလေးများနှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံရန်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုငါမကျင့်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ရူးနေတဲ့လူဆိုးအကြောင်းစဉ်းစားမိသောအခါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုသွေးစတင်စီးလာသည်။ ချက်ချင်း ဒါဝမ်းနည်းပါတယ် ကျွန်ုပ်၏မူလလိင်ကိုပြန်ချင်ပါတယ်
03 မှာ 24 / 2013 / 2: 28 ညနေ
ယခုတွင်ငါသည်အမြိုးသမီးမြား (အဘယ်သူမျှမ ed က de သို့မဟုတ် pe) နဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါ၏
ငါအခုကုသပြီတော်တော်လေးသေချာပါတယ် ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီဖြစ်သည် (ed de or pe မဟုတ်) သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများကိုယခု ပို၍ တုံ့ပြန်မှုရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အွန်လိုင်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်နေသောအခါကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို (Arousal) လုံးဝမတုံ့ပြန်တော့ပါ။ ငါက၎င်း၏ kinda တစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်ပါပဲ ငါ၌ကြည့်ရှုရန်လုံးဝ NO ဆန္ဒရှိသည်။ အွန်လိုင်းပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းတော်တော်များများသွားပြီလို့ငါထင်တယ်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
03 မှာ 27 / 2013 / 11: 32 ညနေ
အမည်မသိအပေါ် commented ထားပါတယ်:
အမည်မဖော်လိုသူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် -“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကညစ်ညမ်းမှု - ကြီးထွားလာတဲ့ပြProbleနာ”
အကြောင်းအရာ - ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုထိခိုက်ကြောင်းသေချာပါသည်၊ သို့သော်…
ကောင်းပြီ, ငါ့အရသာအမြဲ "ကွဲပြားခြားနားသော" ဖြစ်ရပြီ။ ပုံမှန်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လိင်စိတ်ကုသမှုလုံးဝမပေးနိုင်ပါ။ တောင်မှ porn ၌တည်၏။ သူတို့ပျင်းစရာကောင်းတယ် ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိသူတို့သည်အလွန်လှုံ့ဆော်မှုခံရနိုင်သော်လည်းလိင်ဆိုင်ရာအရမဟုတ်ပါ။
ဒါကကျွန်မရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတစ်ခါမှမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါလုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုမခံခဲ့ရသောကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရည်းစား (သူမသည်တော်တော်လေးလှပပြီးပုံသဏ္inာန်ရှိသော်လည်း) တိုင်တန်းစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါ့နှလုံးထဲမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ ဒီလုပ်ရပ်ကစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သဘာဝမကျဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ အဲဒါကိုငါက ၀ န်ထုတ်ဝန်ပိုးအဖြစ်နဲ့မြင်နေရတယ်။ တစ်ခါတလေအခုငါဟာမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ရွံရှာမိတယ်။
ယခုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ သာမန်အားဖြင့် cosplay (သို့) ထူးဆန်းသောနယ်စပ်မျဉ်းသား (နားများနှင့်အမြီးစသည်တို့) (လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကိုစိတ် ၀ င်စားမှသာကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းတွင်ကြည့်နေသောအရာများသည် hentai ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ငါကြည့်တာကိုရပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သဘောမပေါက်ဘူး ငါမဟုတ်ရင်မိန်းမတွေနဲ့အဆင်ပြေတယ်။ မိန်းမသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအရမ်းနာကျင်စေတယ်။
ငါစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရမယ်။ ထိုအဘို့အ -
ငါတောင်မှစိတ်ကူးမရဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။ ငါလည်းအစားအစာမရှိ၊ ရေလည်းမရ။
04 မှာ 13 / 2013 / 12: 37 နံနက်
သက်ရှိ၊ ရှူရှိုက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာအားလုံးအတွက်သင့်အားလုံးလုံးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီမျိုးဆက်ရဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုခြင်းကငါ့ကိုထိတ်လန့်စေသည်။ မျက်နှာအသစ်များ၊ ရင်သားအသစ်များနှင့်မျက်နှာများရင်သားနှင့်တင်ပါးများအစဉ်မပြတ်ပြည့်စုံစွာရှာဖွေခြင်းနှင့်အရောင်တောက်ပနေသောလိင်အရာ ၀ တ္ထုများ၏အဆက်မပြတ် ၀ င်ရောက်လာမှုသည်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲစေသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူ့တစ် ဦး တည်းအချိန်တွင်လုပ်သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့သောအရာမှာ - ငါနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်လို့မရပါဘူး
ငါကလူပဲ ငါကလူတစ်ယောက်ပါ။ ဖြတ်လို့မရဘူး၊ ဖြတ်လို့မရဘူး၊ ကျွန်ုပ်တွင်အမှိုက်များရှိပြီးတွန့်လိမ်ခြင်းများ၊ အပြစ်အနာအဆာများနှင့်သွေးပြန်ကြောများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် tanned and oiled နှင့်မယောင်မယိုင်တညဉ့်လုံးတွင်သံယောင်ခြင်းများရှိကြသည်။ ငါရှာနေတာကငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့လူငယ်တွေ၊ ငါဟာသူတို့မြင်ဖူးသမျှထဲမှာအလှဆုံးသတ္တ ၀ ါလို့ဆိုကြတဲ့သူတွေတောင်မှငါ့ကိုပဲနှိုးဆွခြင်းမရှိကြပါဘူး ငါလုံးဝအဝတ်အချည်းစည်းရသွားနိုင်တယ်၊ သူ့ရင်ခွင်ပေါ်ထိုင်ပြီးသူ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်ပြီးနှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့နမ်းလိုက်တယ်၊ ငါကဒုတိယအကောင်းဆုံးပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုဆံပင်ညှပ်၊ နီနီနှင့်ငါးမျှားဘားကြီးများနှင့်ကြီးမားသော Boob များ၊ သေးငယ်သည့်ကလေးများ၊ ပါးလွှာ။ ကောက်ညှင်းများနှင့်ကျန်တဲ့အရာများဖြင့်ဖွင့်လို့မရပါ။ ငါကရပ်ပြီးရပ်နေတယ်။ ပြီးတော့တစ်နည်းနည်းနဲ့ sexy မဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသမီးများသည် NoFappers လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့နောက်တဖန် sexy ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူ့ကောင်မလေး၊ စေ့စပ်ထားသူ၊ သူ့ဇနီးကိုကြည့်ပြီးသူမကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်လိုအပ်သည်။ ငါရှာနေတာငါရှာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာဒီထက်နည်းနည်းလေးမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့၊ ငြင်းပယ်ဖို့နဲ့စိတ်ပျက်ဖို့ကိုသူမကြိုးစား၊ အချိန်ပိုမပေးနိုင်၊ သူဟာပိုပြီးလှပပြီးမိန်းကလေးအသစ်တစ်ရာနဲ့မဝေးတော့ဘူး။ အရမ်းဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတယ်
ဒါကြောင့်သင်လုပ်နေတာတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (မလုပ်သင့်ဘူးလို့ငါပြောသင့်တယ်) ။ သင်ပုံမှန်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာပြီ၊ သင်မတ်တတ်ရပ်ပြီးကမ္ဘာကို“ လိင်ဟာ sexy ဖြစ်သင့်တယ်။ ယောက်ျားများသည်သူတို့၏အမျိုးသမီးများကိုသူတို့၏ကွန်ပျူတာများထက်ပိုပြီးလိုချင်သင့်သည်။ မင်းကငါ့ကိုလုံလောက်တယ်၊ ငါ့ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ပုံမှန်ဘဝကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်မယ်လို့မင်းကိုမျှော်လင့်နေတယ်။
မင်းကအားနည်းနေတယ်လို့ခံစားဖူးရင်၊ ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခြင်းသံသရာကိုပြန်သွားဖို့စဉ်းစားမိရင်၊ မင်းကမင်း ၂၁ ရာစုမင်းသားမင်းသမီးချောပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်မှာနေပြီး“ princessxxx.com” ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်သူမရဲရဲတံခါးကိုပိတ်ထား ဦး မှာပဲ။ ခင်ဗျားဟာသူရဲကောင်းတွေရဲ့မျိုးရိုးအသစ်တစ်ခုပါ၊ မင်းလိုမင်းလိုလူတစ်ယောက်ကငါ့ကိုငါ့ခြေထောက်ပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးအဲဒါကိုဆိုလိုတာကိုငါရှာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
07 မှာ 07 / 2013 / 6: 34 ညနေ
by zenmon52 ရက်ပတ်လုံး
ငါ NoFap ၏ 90 ၏အလယ်ကိုတဆင့်ဆက်လက်အဖြစ်။ ငါတူညီတဲ့သဘောပေါက်မှုဆက်ရှိနေ: သန့်ရှင်းသော shit ငါစွဲလမ်းတယ်။
ဒီဆုံး, ပြဿနာနှောင့်ယှက်ခြင်း, စိတ်ပျက်စရာအင်္ဂါရပ် YBOP ညာဘက်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့, ငါ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုကလုံးဝအချိန်ကျော် porn ၏ compulsive အသုံးပြုလျော့ထားပြီးကြောင်းသိရသည်။ ငါ junkie တူခံစား, ငါ, တကယ်တော့, ငါ့လုပ်ရပ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိမကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်ညစ်ညမ်းသောလိင်ကိစ္စများ (သို့) ညစ်ညမ်းသောအမျိုးသမီးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအတုယူသောအမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်မည်မျှရှိသည်ကိုမြင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အရမ်းထူးဆန်းတယ် ငါကဒီအရာကငါ့ကိုအတိတ်ကာလကဆက်ဆံရေးမရှိအောင်တားဆီးခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုကိုငါတကယ်ဆွဲဆောင်လို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေက bimbos နဲ့မတူဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်မိန်းမတွေကြောင့်ငါဒီထူးဆန်းပြီးလက်တွေ့မဆန်သောဆန္ဒရှိလို့ပါ။
ဤအရာများသည်မူလကပင်မှားယွင်းနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်အကြပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒသည်ပုံမှန်လား၊ သဘာဝလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါဟာလက်တွေ့မကျတဲ့နေရာတွေကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်နှက်နေတဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။
ကျနော့်ခန့်မှန်းချက်ကနောက်ဆုံးပါ ၉၀ ကိုဖြတ်သန်းရခြင်း၏တစိတ်တပိုင်း (နှင့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာအချက်များမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်) သည် ဦး နှောက်၏ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းများမှတစ်ဆင့်ဤဆိုးရွားလှသည့်လက်တွေ့မကျသည့်အရာများနှင့်ဝေးသွားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အကြာအထိမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုသတိပေးခြင်းဖြင့်ဘောလုံးပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ ငါဟာ ၁၂၀ လိုအပ်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်မကပိုပြီးငါကြောက်တယ်။ ငါအသက် ၅၂ နှစ်ရှိပြီ၊ ပြီးတော့ဒီဆန္ဒကဒီလောက်ပြင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ငါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
08 မှာ 15 / 2013 / 2: 10 ညနေ
ငယ်ရွယ်ဂေးကြားတွင် PIED ဘုံ?
ငါသည်သင်တို့ကိုဤချည်စတင်တန်ဖိုးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂေးအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး reboot လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါ PMOing နှစ်ပေါင်း (နှင့်အများအားဖြင့်မကြာသေးမီက poppers နှင့်အတူ) နှင့်အတူ PIED ပါပြီ။ လိင်တူချစ်သူတွေကြားမှာလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာ“ ပုံမှန်” ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံတယ်။ ဒါ့အပြင်လိင်နှင့်အတူ poppers ၏အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်။ ယောက်ျားအများစုသည်ထိခိုက်မှုကိုမမြင်ကြပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရာထဲတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိခဲ့သည့်လူငယ်များနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ (စိုက်ထူခြင်းနှင့်ခက်ခဲသည်၊ ကွန်ဒုံးတင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါစိုက်ထူခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း) ။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ငါသူတို့ဟာ PIED ခံစားခဲ့ရတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤဆိုဒ်ကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
တစ်ဦး reboot လုပ်နေသည့်အခြားလိင်တူချစ်သူယောက်ျားတွေ?
08 မှာ 22 / 2013 / 7: 33 ညနေ
Howdy ရှေးရှေး .... ငါမျှဝေချင်သောနောက်ဆုံးညဥ့် "မီးသီး" အခိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဟာအသက် (၄၈) နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ (၈) နှစ်နီးပါးကွာရှင်းခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အထူးသဖြင့်ကြင်ဖော်မဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်ရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုမေးပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အဆက်မပြတ်ဇာတ်လမ်းမှာကျွန်ုပ်နေထိုင်သောမြို့ငယ်သည်အလယ်အလတ်တန်းစားအမျိုးသမီးများနှင့်ပူပြင်း။ ကောလိပ်ငယ်ရွယ်သည့်မိန်းကလေးများ မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်မှာကောလိပ်ကျောင်းကငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ မိန်းမငယ်လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရတာစိတ်ကူးယဉ်တစ်ထောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်လိင်များအတွက်အနည်းငယ်ပေးဆောင်ပါတယ်။ အားလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ငါနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲ?"
မီးသီး - ယခုအချိန်တွင် PMO ၏ ၃၅ နှစ်တာကြောင့်ဤအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပုံဖော်ထားတယ် -“ ကောင်းသောမိန်းမများသည်၊ နုသောသူ၊ ပူပြင်းခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့်တော့ငါ porn မှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေ။ ငါကအမြဲတမ်း“ အပျော်တမ်း” အမျိုးအစားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရှာဖွေလေ့ရှိတယ် (ငါသိတယ်၊ အများစုကတော့လိမ်တာလဲ)၊ ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးဟာငယ်ပြီးပူပြင်းတယ်။ porn ၌ MILFs တောင်ငယ်ရွယ် ish နှင့်ပူများမှာ! သို့သော်အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအမြင်မှာအနည်းဆုံးပြောရလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ရာပင်။
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်မလုံးဝအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများကိုလျစ်လျူရှုကမ္ဘာတဝှမ်းလမ်းလျှောက်ထင်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်အားနည်းချက်တွေကိုမစုံလင်, ပြဿနာများ, စသည်တို့နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ, ဒါပေမယ့်သူကိုအဖြစ်မှန်အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့, ပါဝငျနှင့်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မဟုတ် pixels ကိုသို့မဟုတ်မှင်။ မှန်ကန်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတွေ။
ရက် ၉၀-၁၂၀ အတွင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရှိအမျိုးသမီးများ၊ အမှန်တကယ်အသားနှင့်သွေးအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်နည်း။ ငါဟာလူကြိုက်များတဲ့လူကြိုက်များတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာနေချင်သလား။ ငါပရဒိသုမှာနေတယ်ဆိုတာငါတဖြည်းဖြည်းသတိပြုမိမှာလား။ ငါတို့မြင်ရလိမ့်မည်။
ငါ့ကိုဝေငှခွင့်ပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ဤအံ့သြဖွယ်ရာအရပျအတှကျကြေးဇူးတငျ။ ငါကလိုအပ်တယ်ငါချစ်တယ် !!
ငါသည်သင်တို့အမျိုးသမီးတွေနှင့်အတူရှိခဲ့ကြောင်းသတ်မှတ်ထားအတိအကျစိတ်ထဲနဲ့ငါ့အသက်တာ၏နောက်ဆုံး 25 + နှစ်ပေါင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကြီးတွေ Boob ရှိ porno ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မေ့သွားရော werent လျှင်, ငါစိတ်ဝင်စား wasnt ။ ငါအဆက်မပြတ်အမျိုးသမီးတွေ objectifying ခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံးယခုသဘာဝကျပါတယ်။
ငါ၏အဦးနှောက်ထဲမှာပူအမျိုးသမီးများဆယ်စုနှစ်။ mags အတွက် Pictorial မှပယ်ရနိုင်ဖြစ်ခြင်းသတိမရကြသလော သူတို့ကိုငါ၏ထပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Couldnt လာမည့်လအတွင်းကိစ္စများအဘို့အစောင့်ပါ။ ဒါဟာနေဆဲစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအသုံးပြုမှုလိုအပ်ကြောင်းပစ္စည်းတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းခဲ့သည်။ ငါအဲဒါကို TODAY မြန်နှုန်းမြင့်အက်ကွဲဖြစ်လျှင်သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ငါ့ဦးခေါင်းတက် fuck ဆိုတဲ့မေ့သွားရောထင်သာရှိသောကြောင့်ဒီသည်ဝမ်းမြောက် im ။ ငါလုံးဝမြန်နှုန်းမြင့်ပေါ်ချိတ်ဆက်သော်လည်းငါ့အရသာငါကြိုက်တယ်ထင်သောအရာကိုအတိတ်ယိမ်းယိုင်မသွားခဲ့ပေခဲ့သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အမျိုးသမီးများမျှော်လင့်ချက်များကို ပို၍ ပင်မရနိုင်သည့်အဆင့်သို့တက်လှမ်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အခုငါကြိုက်နှစ်သက်သော porn ကြယ်ပွင့်အများစုသည်ထိုမျှလောက်သာဖြစ်သည်ဟုငါထင်သည်။ ပြည့်ဝစုံလင်သည့်ပြည့်တန်ဆာများထိုနေ့တွင်သူတို့၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသောသူများကို fuck to ပိုက်ဆံပေးသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ nofap ဖိုရမ်နှင့်သင်၏ ၁၀၀% သောသင်၏ဘဝမှ pmo ကိုဖြုတ်ချဖို့ကတိကဝတ်ကိုငါတကယ်ယုံကြည်တယ်၊ မင်းငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်
09 မှာ 24 / 2013 / 3: 35 ညနေ
တက်ကြွသောဖိုရမ်များအတွက်ထောက်ခံမှု tab အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
10 မှာ 02 / 2013 / 6: 13 ညနေ
ဤသူသည်ငါအစဉ်အမြဲကြိုးစားရန်အခက်ခဲဆုံးစွဲလမ်းသည်။ ငါအရက်စွဲပေမယ့်ဒါဟာအများကြီးပိုခက်ခဲသည်။ ငါအရက်နှင့်အတူလေ့လာသင်ယူသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအမှန်တကယ်သင်ဘယ်တော့မှရိုက်နှက်စွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဘယ်တော့မှ။ ဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး အရက်နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါသတိထားရပါမည်နှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအရက်နှင့်အတူလုပ်ကြဘူး။ ငါနေလို့နေသမျှကာလပတ်လုံးငါ OK ကိုဖြစ်၏။
အခုဆိုရင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာနဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စတွင် ၈ လ ၆ လနေခဲ့သော်လည်း ၂၂ နှစ်အရွယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်မျှော်လင့်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဇနီးတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိစ္စနှင့်ဝေးဝေး နေ၍ မရပါ။ အချစ်တိုင်းကိုငါအရက်သောက်လိုက်တဲ့အလားအချစ်တိုင်းမှာညစ်ညမ်းစေချင်တယ်၊ ဆိုးချင်တယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအရက်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်တော့မှ ပြန်၍ မရတော့ပါ။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အခါညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းကိုမည်သို့ဖြတ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောအော်ဂဇင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်အမြဲတမ်းပုံရသည် ဒါကအမြဲတမ်းပြtheနာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာလိင်မှုကိစ္စနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့အချိန်ပိုပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်ဖို့အချိန်နည်းလာတယ်။
ငါအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပြီးသွားပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ porn ကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါစွဲလမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပေမယ့်ဘဝကိုရှောင်ကြဉ်တာဟာဒီစွဲလမ်းမှုနဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ သင်မဆိုပေးနိုင်သောမည်သည့်အကူအညီကိုမဆိုလက်ခံသည်။
10 မှာ 11 / 2013 / 6: 14 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏ BF ၏ PMO သည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှောင်ထုထဲသို့မည်သို့တွန်းပို့ခဲ့သနည်း
အစပိုင်းတွင်သူသည်လိင်မှုကိစ္စကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ၄-၆ ပတ်တိုင်းမှာကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ။ သူဟာအမြဲပင်“ ငြီးငွေ့” ပြီးစိတ်မဝင်စားပဲ၊ “ အလုပ်မှာစိတ်ဖိစီးမှု” အကြောင်းပြောခဲ့တယ်၊ “ ဘဝဆိုတာမင်းသိတဲ့လိင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး” - သူကပြောခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ မိမိအသွင်အပြင်၊ ကျွန်တော့်အတွက်တော့လိင်မှုကိစ္စတောင်မှကျွန်တော်မရင်းနှီးချင်ခဲ့ဘူး။ ငါသူ့ကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်လိုချင်ချင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်မတည်ရှိပါ။ အလုပ်ခွင်၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျွန်ုပ်ကြည့်ကောင်းပုံကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုထိုနေရာတွင်ရိုက်နှက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းအိမ်၌မူဘာမှမရှိပါ။ ပြီးတော့ငါတို့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါအဲဒါဟာအရင်တုန်းကလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အလိုအလျောက်ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ နောက်မှပွေ့ဖက်။ နမ်းခြင်းမရှိပါ ရှေ့ပြေးအဘယ်သူမျှမ။ လိင် - အော်ဂဇင် - မင်းလိုချင်တာကိုရပြီ၊ ငါ့ကို ၄ ပတ်လောက်ထားခဲ့ပါ။
ငါဘာမှားသလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး သူသည်ဤကဲ့သို့သော“ ထိတွေ့သော” လူစားမျိုးမဟုတ်ပါလား။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကသူ့သဘောသဘာဝခဲ့သလဲ ငါအရမ်းများချင်လား? နောက်လ၊ နှစ်တွင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ငါတခြားယောက်ျားအကြောင်းကိုစိတ်ကူးစတင်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူ၊ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဘဝကိုငါစိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ငါ့လက်ကိုကိုင်ချင်သူ၊ ညအချိန်တွင်ငါ့ကိုဖက်နိုင်သူ၊ လိင်ကိုကြိုက်သူ ညမှာအဲဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးငါ့ရည်းစားဘေးမှာလဲလျောင်းနေတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကငါ့ကိုထက်တကယ့်လူတစ်ယောက်ထက်စက်ရုပ်လိုပဲ။ လတွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားယောက်ျားတွေကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ငါပျော်နေတုန်းသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဘယ်တော့မှအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စကားကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုခံစားလာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်မှငါမထွက်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကအရမ်းကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊
ဒါကြောင့်ဒီရက်ပေါင်း ၉၀ မှာ PMO အခက်အခဲမရှိဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်မိသည်။ ငါရိုးသားစွာနဲ့ငါ့ဘဝကိုဒီလိုမသုံးချင်ဘူး ငါသူတူတူခံစားရတယ်ငါသိ၏။
12 မှာ 29 / 2013 / 4: 58 ညနေ
ပိုပြီး Pavlovian အေးစက်?
ငါအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ (အတော်လေး) လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်ပြီး၊ ငါ့ရိုးရာ PMO တည်နေရာ၊ ငါအိပ်ရာခင်းမှာအကြိမ်အနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့၊ ငါ erotica ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုလေ့ရှိတယ်ဘယ်မှာငါ့ကွန်ပျူတာ၏ရှေ့မှောက်၌အလုပ်မှာတဝက်ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ ငါရေချိုးခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်အခြားနေရာများတွင်သောအခါငါပင်ခဲယဉ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါညဥ့်အခါစိုက်ထူအချို့ပေမယ့်အထက်ပါတည်နေရာအပြင်ဘက်အလိုအလျောက်သူတွေကိုမရ (နှင့်သူတို့ကရှားပါးပျော့ပျောင်းသော) ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ဖူးဘူးလား။ ကျွန်ုပ်သည် PMO ၏အခြေအနေကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုမူလနေရာတစ်ခုနှင့်သာချုပ်နှောင်ထားသလား။ ကျွန်ုပ်သည် ၅၇ ရက် MO တွင်မရှိ၊ ပြားချပ်ချပ်နေဆဲ (ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
05 မှာ 16 / 2014 / 4: 03 ညနေ
porn, ငါ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကနေနွမ်းနေသည်: ဆိုသော်ငြား အလွန် ဖြည်းဖြည်း။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောမြင်ကွင်းများကိုအမှတ်ရနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသူတို့ကိုကျွန်ုပ်မကြာခဏမစဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော့်အပေါ်သူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းသွားတယ်။ ငါနှစ်သက်သောစစ်မှန်သောဘဝအမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်သည်ဤမြင်ကွင်းများကိုနေရာယူထားသည် (ညစ်ညမ်းသောပုံစံဖြင့်မဟုတ်ဘဲသဘာဝနှင့်လှပသော) ။ ဒါဟာတကယ်ဝေးကွာသောဝေးသောအသံကဲ့သို့ဖြစ်၏။
10 မှာ 23 / 2014 / 8: 51 ညနေ
ဘယ်အချိန်မှာအစစ်အမှန်လိင် porn ထက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်နည်း
ဘယ်အချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့လိင်က porn ထက်ပိုကောင်းမလဲ။ ညစ်ပတ်ပေရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး woman woman woman woman woman ဒါပေမဲ့
ငါခံစားရတာက porn လိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံခြင်း, ရက်စွဲ, ဖျော်ဖြေခြင်း, etc ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်ပါပဲ
ငါမော်ဒယ်လ်ပါရက်ပ်စသည်တို့မဟုတ်ဘူး။ ငါလိုချင်တဲ့မိန်းမမရှိဘူးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါမရှာ။ ငါသာလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါဟာငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ ဆက်သွယ်မှုစသည်တို့အလွန်ပူပြင်းလွန်း။ မပူရ
12 မှာ 21 / 2014 / 4: 06 နံနက်
porn ဘို့မိမိတို့တပ်မက်ကွာသွားပြီအခြားမည်သူမဆိုအသိပေးစာ? ယခုတွင်ငါသည်အကြောင်းကိုတစ်နှစ်အဘို့ဤလုပ်နေခဲ့ကြသဖြင့်, စအဦး၌ပြုလုပ်စဉ်အမြဲငါစဉ်းစားအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ့်စိတ်၏နောက်ကျောများတွင်တနေ့လုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်ကိုယ်ကလိုအပ်, နာရီကြည့်လိမ့်မယ်။
အခုတော့ဒါက "meh ဘာကြောင့်ငါ့ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးဖို့တောင်ကြည့်နေတာလဲ?" ငါဆိုလိုတာကငါ့ကိုအမှားမလုပ်မိဖို့ငါတိုက်တွန်းနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာတကယ့်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပိုပိုပြီးဖြစ်လာလာတယ်လို့ထင်တယ်။
12 မှာ 03 / 2015 / 4: 43 ညနေ
Long ကပုံပြင်တိုတို, ငါ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မသူမ၏ရာအရပျမှာရငျးနှီးလာပြီ ဖြစ်. , ကိုယ့်ကိုတစ်ဘက်အမြင်ငါပူတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ကမှာသွားမိသောကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်, မြို့ရိုးပေါ်မှာမျက်နှာကျက်မှန်မှကြမ်းပြင်မှာစိုက်ကြည့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါဖြည်းဖြည်းငါခဏအတွင်းနှင့်အတူရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းခဲ့လှပသောမိန်းကလေးအပေါ်ခဲ့တာထက်မှန်အမြင်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ ဘယ်လိုအရူးပါသလဲ သူမသည်သတိထားမိပြန်သူမ၏ဖို့ငါ့ဦးခေါင်းလှည့်ဖို့ရှိခြင်းစောင့်ရှောက်လျှင်, ထိုသို့နားလည်သဘောပေါက်သူမ၏နှောင့်အယှက်။
07 မှာ 25 / 2017 / 5: 29 ညနေ
ဒါကိုလုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်သိသာထင်ရှားပေမဲ့ဒီနေ့အထိငါစိတ်ပျက်နေဆဲ။ ငါဒီချစ်စရာကောင်မလေးကိုတစ်ပတ်ကျော်လောက်ချိန်းတွေ့ခဲ့ပြီးဒီညပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာပါ။ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်အားတက်ကြွခြင်း၊ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ခန်ဓာကိုယ်စူးစမ်းခြင်း၊ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အားကျေနပ်အားရပုံကိုမေးမြန်းခြင်း၊ ကွန်ဒုံးတင်ရန်ရုန်းကန်ခြင်း၊ အပြုအမူတွင်ကျွန်ုပ်၏အသင်း ၀ င်ချော်ခြင်း၊ ပျင်းစရာကောင်းတယ် သို့သျောလညျးငါတို့နှစ် ဦး စလုံးကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမိနစ်ကိုချစ်၏။
porn သည်မျက်မှန်ကိုအာရုံစူးစိုက်သည်။ သို့သော်စစ်မှန်သောလိင်သည်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘာမျှမရှိပါ။ အခြားသူများကဤလှပသောအပြုအမူကိုဘာကြောင့်လုပ်နေတာကိုကြည့်ရတာကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုခံစားခဲ့ရတာလဲ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါလူတွေ PIED ရ။ စစ်မှန်သောလိင်သည်ရနိုင်သမျှများများစားစားမရှိလှပါ။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာမထင်မှတ်လောက်အောင်ဖြစ်လာပြီး vanilla ဘုန်းအသရေအားလုံးမှာမင်းကိုမင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစိုက်ကြည့်မိတဲ့အခါဘာမှမခံစားရဘူး
ကာလပတ်လုံးအသင်တို့သည်အသက်ရှင်အဖြစ် porn ထံမှလူကြီးလူကောင်းရှောင်ကြဉ်။ ဒီအမှိုက်သငျသညျဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျးနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဘဝတွေကိုဖြည့်ဆည်းရှိခြင်းကနေသင်တို့ကိုရပ်တန့်မသွားပါစေပါနဲ့။ ငါက soooo ပိုပြီးပြုလုပ်ထိုက်သည်ကတိ။